February 2013 | ကမ်းလက်
ဟောင်းလည်း ကောင်းရင် ပြုံးရတယ်
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 2/28/2013 - No comments
ဟာသတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဟာသတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခေတ်ကိုပဲ ခန့် မှန်းရတာ ခပ်ခက်ခက်ပါလို့ဆိုကြပါတယ်။ အများအားဖြင့် အာရှမှာပဲ စခဲ့ တာပါ။ အောက်က ဂျုတ်ဆိုရင် ကိုးရာစုလောက်က ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေ ယူဆကြပါတယ်။ မွတ်စလင်ဘာသာရေး နောက်ခံ ဂျုတ်ပါ။
သူ့ကိုသူ ဂေါ့ဒ် ( God ) လို့ ကြွေးကြော်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ဘာသာရေး တရားခုံရုံးရှေ့ ခေါ်လာကြတယ်။
" မင်း ပါးစပ် မဟခင် သတိပေးစကားတစ်ခွန်းပြောထားမယ်။ မနှစ်က သူ့ကိုသူ ဘုရားရှင် ( God ) ရဲ့တမန်တော်ပါလို့ဝန်ခံတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ငါတို့ရုံးက သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တယ် "
ဒီတော့ ဂေါ့ဒ် ( God ) ဆိုသူက
" ချီးကြူးပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ပစ်ဒဏ်စီရင်တာ မှန်ပါတယ်။ သူ့ကို ကျုပ် စေလွှတ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး " တဲ့။
ရင်ထဲ ခိုးကူးမိတဲ့ သူတို့စာမျက်နှာများ
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 2/28/2013 - No comments
( ကမ်းလက် လပတ်လည်အတွက် ရေးထားတာ ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ ဒီဆောင်း ပါးလေးကို တင်လိုက်ပါတယ် )
၁ ။ အဲလက်(စ်) ဖာဂူဆန်
ဘောလုံးစွဲ၊ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်စွဲ ဆရာသမားကြောင့် ကျနော့်ဘဝ ထဲကို အရင်ဆုံး ဝင်လာသူကတော့ ဆယ်ကျော်သက်ဘဝကတည်းက ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်ခဲ့ရတဲ့ ရွာအနောက်ခြမ်းက လူကြီးတစ်ယောက်ပါ။ သူ့နာမည်က ဖာဂူဆန်။ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အညီ ပြောရရင် ဆာ အဲလက်(စ်) ဖာဂူဆန်ပါ။ သူနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး သိလာရတဲ့လူတွေ အများကြီးပဲ။
ဖူဂူဆန်နဲ့ ပတ်သက်လို့ နာမည်ကြီးတာတွေက
၁။ Men-management (လူကို ထိမ်းသိမ်းမှုစွမ်းရည်)
၂။ Mind game (တစ်ဖက်သားကို စကားနဲ့ ကလိတာ)
၃။ Hair dryer treatment (အလိုမကျရင် နားနားကပ်ပြီး အော်တော့ စိုနေတဲ့ဆံပင်တောင် ခြောက်သွားတာ)
ဘောလုံးအသင်းတွေသာ ပြောင်းသွားတယ်၊ အောင်မြင်တဲ့ ဖာဂူဆန်ရဲ့ အ သင်းပုံစံက ပြောင်းမသွားဘူး။ သစ္စာရှိရင် ရှိသလို ဆက်ဆံတယ်။ ရိုင်ယံဂစ် တို့၊ ပေါ့လ်စခိုးတို့ဆိုရင် ဒီနေ့အထိ ဘောလုံးကန်နေ ကြ၊ ခြေစွမ်းပြနေကြ တုန်းပဲ။ အဲ့သလိုပဲ၊ ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ကြောင့် အသင်းရဲ့ စည်း လုံးရေးကို ထိခိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့ အကောင်ကြီး ပဲဖြစ်ဖြစ် ရောင်းထုတ်တာပဲ။ တော်တော် ရက်စက်တယ်။
ပထမ ရှိုင်ကိန်း၊ သူ့နောက် ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း၊ ပြီးတော့ နစ်စတယ်ရှိုင်း ၊ နောက်ဆုံး ရော်နာဒို။ သူတို့ မရှိရင် အသင်းထိခိုက်မယ်၊ ဖာဂူဆန်ဟာ သူ့အတ္တကြောင့်ပဲကျရှုံးရတော့မယ်ဆိုတဲ့ တောင်ရောက် မြောက်ရောက် ပြောတတ်တဲ့ပါးစပ်တွေ ပိတ်ကုန်အောင် ဖာဂူဆန်က ဖလားတစ်လုံး ယူပြသွားခဲ့ တယ်။ တကယ်တော့ ဖာဂူဆန်အတ္တက အသင်းအပေါ်မှာထား တဲ့ စေတနာ နဲ့ ရောနေပါတယ်။
No man is bigger than the team ပါပဲ။
ဂျစ်ကန်ကန် ဝိန်းရွန်နီကို ဖာဂူဆန်က မိန်းမပေးစားလိုက်တယ်။ သူ့တာဝန် တစ်ဝက်ကို သူ့မိန်းမကို ခွဲပေးလိုက်တာပါ။ အခုဆိုရင် ရွန်နီက ရင့်ကျက်နေ ပြီ။
ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ (ဗုဒ္ဓဘာသာကို သိသလိုလိုနဲ့) ပြောရင် အတ္တကြီးတယ် လို့ ဆိုမလား။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက်မှ မမာရင် အောင်မြင်မှုက ဘယ်အပေါက် က ဝင်လာမလဲ။ ဖာဂူဆန်အကြောင်း ရေးစရာတွေ များပေမယ့် သိပ်မချဲ့ လိုတော့ပါဘူး။
သူဟာ ယုံကြည်မှုရှိတယ်။ ပြတ်သားတယ်၊ ရက်စက်တယ်၊ အောင်မြင်မှုကို လိုလားတယ်။ ဒါတွေဟာ လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းတွေလို့ ထင်ပါတယ်။ သူ့အပေါ် သစ္စာရှိရင် သူကလည်း သစ္စာပြန်ရှိတယ်။ ဒီလောက် ကိုယ့်အပေါ် မှာ လွမ်းမိုးမှုရှိနေတော့ သိသိသာသာရော၊ မသိမသာပါ ခူးကူးမိတဲ့ ဖာဂူဆန် ရဲ့ စာမျက်နှာတွေ ဘဝထဲမှာ ရှိကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုရှိတာက ဖာဂူဆန်ကို လေးစားပေမယ့် မချစ်ဘူး။
၂ ။ လီကွမ်းယု
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ လီကွမ်းယုပါ။ လီကွမ်းယုကလည်း အတ္တတော့ ခပ်ကြီးကြီးထဲကပါ။ အဓိပ္ပါယ်မရှိတာ လုပ်လို့ကတော့ တစ်ကြိမ်ပါပဲ။ ဒီနေရာ မှာ “အတ္တ” ဆိုတာက ပြောဖို့ တော်တော် ခက်တယ်။ တံငါရွာ စင်္ကာပူဟာ ကမ္ဘာထဲဝင် ရင်ဘောင်တန်းနေတာ လီကွမ်းယုကြောင့်ပါ။ ဒါတွေက လူတိုင်း သိတဲ့ကိစ္စ။
သူကလည်း တကယ်တာ့ “Team Player” ပါ။ သူ့အသင်းကို သူတည်ေ ဆာက်တယ်။ လူရွေးတယ်၊ လူမွေးတယ်၊ သူ့ကို သစ္စာရှိရင် သူက သစ္စာ ရှိတယ်။ အသင်းကို ထိခိုက်လာအောင် လုပ်ရင်တော့ သူကလည်း ကန်ထုတ် ဖို့ လက်မနှေးဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က ဘာသာရေးအလှူခံ ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြဿ နာတွေ တက်တယ်။ အဲ့ဒီပြဿနာထဲမှာ သူ့ Team ထဲက လူငယ်၊ လူထက် ဆရာဝန်ပါလီမန်အမတ်လည်း ပါဝင် ပတ်သက်နေတယ်။ ကျနော်ကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ သူ့ပါတီထက် ဒီပါလီမန်အမတ်ကို လီကွမ်းယု ဘာလုပ်မလဲ လို့ စိတ်ဝင်စားနေမိတယ်။ မကြာပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်လည်းဆိုရော အဲ့ဒီ ပါလီမန်အမတ်ရဲ့နာမည် ပါမလာဘူး။ ဒါပါပဲ။
ဒါက လက်တလောကိစ္စပါ။ ဒီလို လီကွမ်းယု ခေါက်ထားခဲ့တဲ့ လူတော်တွေ အများကြီးပါ။ နာမည်ပျက် (သိသိသာသာကြီး) သိပ်မရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဟောင်း ဂျော့(ဂ်ျ)ယိုးတို့လို ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှုံး တာတောင် ဆွဲထားတုန်းပါ။ အဆင်ပြေတဲ့ အချိန်မှာ ဂျော့(ဂ်ျ)ယိုးဟာ တစ်နေရာကနေ အသင်းထဲ ဝင်ပါလာပါလိမ့်ဦးမယ်။ အဲ့ဒါ လီကွမ်းယုပါပဲ။
မမှားသင့်တဲ့အမှားကို လုပ်မိရင်တော့ လီကွမ်းယုကလည်း တစ်ကြိမ်ဆို လုံလောက်တယ်။ သူလည်း ရဲရင့်တယ်၊ ရက်စက်တယ်၊ သူ့ကို သစ္စာရှိရင် သူက သစ္စာရှိတယ်။ အောင်မြင်မှုကို လိုလားတယ်။ အသင်းကို ထိုခိုက်ရင် ခွင့်မလွှတ်တတ်ဘူး။
လီကွမ်းယုနဲ့ ဖာဂူဆန် တော်တော် ဆင်ပါတယ်။ ဖာဂူဆန်ကလည်း အဘိုးကြီးတစ်ယောက် အနေနဲ့ နည်းပြတုန်း၊ လီကွမ်းယုကလည်း (၉၀) နားသာ ကပ်နေတယ်၊ သူ့စင်္ကာပူကို နောက်ကွယ်က သူ ထိမ်းထားတုန်းပဲ။
လီကွမ်းယုကိုလည်း လေးစားမိပေမယ့် ချစ်လို့ မရဘူး။
ဆရာတော်တစ်ပါးကို "ချစ်" ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရသုံးလို့တော့ အဆင်မပြေတော့ ပါဘူး။ မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော်ကိုကျတော့ လေးစားတာရော၊ ကြည်ညို ချစ် ခင်တာရော ရောနေပါတယ်။ အကြောင်း တိုက်ဆိုက်မှ စာနဲ့ ကြည်ညိုပါဦး မယ်။
နောက်ပြီး ဒီနေ့အထိ စာတွေ ဖတ်ရင်း စိုးမိုးလာတဲ့ ဆရာတွေကတော့ ဆရာ သစ္စာနီနဲ့ တာရာမင်းဝေတို့ပါပဲ။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ရေးဟန်တွေက ရိုး ရိုးသားသားနဲ့ ရေးချင်တာ၊ ရေးချင်သလို ရေးချလိုက်ကြတာပါ။ အနုပညာဗီဇတွေကြောင့် သူတို့စာတွေဟာ မူကွဲပြီး လေးစားစရာ ဖြစ်နေ တယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ရိုးသားမှုကို ခံစားလို့ရ ချစ်သွားတာပါပဲ။
ဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့ စာရေးဆရာနှစ်ယောက်ကိုတော့ လေးစား တဲ့အထဲ မှာရော၊ ချစ်တဲ့အထဲမှာပါ ထည့်ထားရပါတော့တယ်။ သူတို့လောက် မစွံပေမယ့် သူတို့ရဲ့ စာမျက်နှာတစ်ချို့ကိုလည်း (သိသိသာသာရော၊ မသိ မသာပါ) ခိုးကူးမိတာတွေ ရှိမှာပါ။ သူတို့နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း သိပ် ပြော စရာ မလိုတော့ မပြောတော့ပါဘူး။ ဒီသုံးဦးဟာ ကျနော်တို့ ဖေ့စ်ဘုတ်ရဲ့ "Likes" တွေပါဘဲ။ စာပေဖက်မှာတော့ ထပ်တိုးဖို့လည်း စိတ်ကူးမရှိသေး ပါဘူး။
နောက်ဆုံးပြောစရာရှိတာက ချစ်စရာလည်းကောင်း၊ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာလည်း အမြတ်တနိုးရှိတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိတ်ဆွေတွေဟာ အများအားဖြင့် ရောင့်ရဲတတ်ကြ သူတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါ တယ်။ စိန်ခေါ်မှုကို သိပ်မလိုချင်ကြဘူး။ သူတို့ကိုကျတော့ ချစ်ပေမယ့် လေး စားမှု လျော့နေတတ်ပြန်ရော။ ဒီတော့ ခိုးကူးစရာ စာမျက်နှာက သိပ် မရှိပြန်တော့ဘူး။ (မရှိဘူး မဆိုလိုပါ။)
ခိုးကူးမိတဲ့ စာမျက်နှာ တချို့ဟာ မချစ်ပေမယ့် လေးစားမိသူတွေဆီ က ဖြစ်နေတာကို အံ့ဩဖွယ် တွေ့ရပါတယ်။ (ဖာဂူဆန်နဲ့ လီကွမ်းယုတို့က ဥပမာ သဘောမျှသာပါ။)
သူများဆီမှာ ဘယ်လိုရှိတယ် မသိပေမယ့် အတုခိုးဖို့တော့ ချစ်စရာ မလိုဘူး ဆိုတာ (ချစ်စရာ ကောင်းဖို့လည်း မလိုဘူး) ကိုယ့်အတ္တကနေ ပြန်ကြည့် မိ တယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ်တိုင်လည်း လေးစား၊ ချစ်မြတ်နိုးမှုလည်းရှိ သူတွေဆီက ယူစရာတွေဟာ စိတ်ချမ်းသာမှုကိုတော့ ပေး မှာ သေချာပါ တယ်။
ဘဝဆိုတာကပင် " ကျောင်း " လို့ပြောကြတယ် မဟုတ်လား။
in Reader's Digest, ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 2/28/2013 - No comments
အလုပ်ခန့်ဖို့အတွက် ခေါ်တွေ့တဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပါ
အလုပ်ရှင် ။ ။ ဒီအလုပ်ကိုမလျှောက်ခင် အရင်အလုပ်မှာတုန်းက ခင်ဗျား မှားခဲ့တဲ့အမှားတစ်ခုနဲ့ အဲဒီအမှားကို ဘယ်လို ပြုပြင်ယူခဲ့ရတယ် ဆိုတာ တစ်ခုလောက် ပြောပြပေးပါလား။
အလုပ်လျှောက်သူ။ ။ ကျနော့်အမှားကတော့ ကုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်းကို ခိုးယူ ခဲ့မိတာပါပဲ။
အလုပ်ရှင် ။ ။ ဒီ အမှားကို ဘယ်လိုများ ပြုပြင်ယူခဲ့ပါသလဲ။
အလုပ်လျှောက်သူ။ ။ ဟုတ်တယ်၊ ကျနော်လည်း နောက်မှ သဘောပေါက် သွားတာ။ ဒါကြောင့် ပြန်လျော်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အလုပ်ရှင် ။ ။ ကိုယ့်အမှားကို မလွန်ခင် သဘောပေါက်မိတာ ကောင်း တာပေါ့ဗျာ။ လူတိုင်း အမှားနဲ့ မကင်းကြပါဘူး။ ဒါနဲ့ ဘာကြောင့်များ အမြင် မှန်ရသွားတာလဲ ပြောပြပါဦး။
အလုပ်လျှောက်သူ။ ။ ကျနော့်ဘေးက ငနဲက ဘော့စ် မသိခင် ကျနော်ခိုး တယ်ဆိုတာ သိသွားလို့ပါ။
Ref: R.D, Oct, 2010
Labels: Reader's Digest, ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ
အဘိဓမ္မာသင်တန်း - မတ်လ ၃ ရက်နေ့စတင်မည်
in ဘာသာရေးသတင်း - on 2/27/2013 - No comments
အဘိဓမ္မာတရားတော်အား အခြေခံမှစတင်လေ့လာလိုသူများနှင့် ဒီဇင်ဘာလ အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲတွင် ( စင်ကာပူစာစစ်ဋ္ဌာနမှ ) ဝင်ရောက်ဖြေဆိုလိုသူများအတွက် အဘိဓမ္မာ အသင်းကြီး ( စင်္ကာပူ ) မှ တာဝန်ယူ ဖွင့်လှစ်သော အဘိဓမ္မာသင်တန်းအား ၂၀၁၃ခု မတ်လ ၃ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများ အောက်ပါအကျိုးတော်ဆောင်များထံသို့ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြပါပြီ။
ကိုဇော်မျိုးမင်း - 90479374 ၊ ကိုအောင်သက်ခိုင် - 91699975
ပြန်ချင်တဲ့ ကွန်မင့်များ ( ၁၁ ) ဂျပန်ကမြန်မာကိုပေးနေတဲ့ ခံစားချက်လျော်ကြေး
in စာဖတ်သူသို့ပြန်စာ, ဇင်ဝေသော် - on 2/27/2013 - No comments
" လေးစားဖို့တော့ ကောင်းပါတယ်.. ဒါပေမယ့် အဖြူကောင်နေရာ မှာ အေး ရှန်း တစ်ယောက် ဆိုရင်ရော.. ဂျပန်က အားနာပါမလား မသိဘူးနော်.." ဆိုတဲ့
နန်းဖြူဖြူရဲ့ လေးစားစရာ သံယက ဂျပန်နဲ့ မြန်မာအကြောင်း ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ် ရေးဖြစ်စေခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တော့ နေမဝင်အင်ပါယာထောင်ချင်တဲ့ ဗြိတိသျှတွေ လည်း အသက်ပေါင်းများစွာပေးခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပေးခဲ့ရတဲ့အသက်တွေက သာမန်စစ်သားတွေနဲ့ ဆင်းရဲသားလူတန်းစားတွေ များနေတယ်။ စစ်ကြီးပြီးတော့ အရာရှိကြီးပိုင်းနဲ့ လူချမ်းသာ အသိုင်းအဝိုင်းက ဒီအတွက် အပြစ်ရှိသလိုလို ခံစားကြရတယ်။ သာမန်လူတန်းစား ကို ပြန်ပေးရ မယ့်လျှော်ကြေးတွေလည်း ရှိတယ်ပေါ့။ ဒီ ခံစားချက်ကပဲ လေဘာပါတီကို အား သစ်သွေးပေးခဲ့တယ်လို့ ဖတ်ရဖူးပါတယ်။ ဖြစ်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဲသလိုပါပဲ မြန်မာတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဂျပန်အများစုက ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက သူတို့ ပြစ်မှုတွေအတွက် ပေးဆပ်စရာရှိတယ်လို့ ခံယူကြဆဲပါ။ ကျနော်လက် လှမ်းမီသလောက်တော့ ဂျပန်နဲ့ပေါင်းရင် မရှုံးဘူးဆိုတာ သတိထားမိပါတယ်။
ဒီအမြင်က တစ်ဦးချင်းနဲ့ဆိုင်သလို အစိုးရအဆင့်အထိလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး အစိုးရအဆင့်ကို ကြည့်ရအောင်။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံပေါ် တင်နေတဲ့ အကြွေးတွေထဲမှာ ဂျပန်တွေ လျှော်ပစ်လိုက်တဲ့အကြွေးတွေ မနည်းဘူး။ ဘယ် အာရှနိုင်ငံက ဒီလောက် စိတ်ကောင်းရှိလို့လဲ။ ( ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက သူတို့ ပြစ်မှုတွေအတွက် ပေးဆပ်စရာရှိတယ်လို့ ခံယူကြဆဲပါ )
ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အနုပညာကဏ္ဍ ( စာပေနဲ့ ရုပ်ရှင် ) မှာလည်း ဂျာနယ်ကျော်ဒေါ်မမလေးတို့ခေတ်ကတည်းက ရင်းရင်းနှီးနှီး နီးစပ်မှုခဲ့ကြရှိ တယ်။ မြန်မာတွေ ဂျပန်တွေလောက် ကြိုးစားသလား၊ ဂျပန်တွေလောက် တော်သလား ကလွဲရင် စိတ် ခံစားမှုမှာ တော်တော် ဆင်ကြပါတယ်။ အားနာတတ်တာ၊ " နိုး " ပြောဖို့ ဝန်လေးတတ်တာမျိုးတွေ ပါ။
၁၉၉၀ ခုတွေတုန်းက ကျနော်ကိုယ်တိုင် ဂျပန်တွေနဲ့ ရင်းနီးခဲ့ရဖူးတယ်။ အများစုက ယဉ်ကျေးကြ၊ အားနာတတ်ကြတယ်။ကျနော့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဂျပန်မနောက် ပါသွားတယ်။ သိရသလောက် သမီးလေးတစ်ယောက်နဲ့ သူတို့အိမ်ထောင်ရေးဟာ သာသာယာယာပဲ။
နောက်ပြီး ဂျပန်က တိုကျိုတက္ကသိုလ်မှာ ဒေါက်တာဘွဲ့ယူခဲတဲ့ ( ရွှေမြန်မာ အယ်ဒီတာချုပ်၊ စာ ရေးဖော်ရေးဖက် ) ဒေါက်တာခင်မောင်လတ်ရဲ့ " တော်တော် ခွကျတဲ့လူ " စာအုပ်ထဲမှာလည်း ဂျပန်ပါမောက္ခ ဘယ်လောက် စိတ်ဓာတ်ကောင်းကြောင်း ထပ်တွေ့ရပြန်တယ်။
ပြီးတော့ ကိုရီးယားမှာ ဒေါ်စုကိုယ်တိုင် တကယ်ပဲပြောခဲ့သလား၊ မီဒီယာ ဖွ ချက်လားတော့ မသိဘူး။စစ်အတွင်းက ဂျပန်ရဲ့ အနာဟောင်းကို ဒုတ်နဲ့ဆွ တဲ့ကိစ္စလေ။ ဒါကို မခံမရပ်နိုင်တဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ယူကျုကနေ ဝမ်းမင်းရှိုး ရင်ဖွင့်ပါလေရော။ အားလုံးသိကြပါတယ်။
ဂျာမန်တွေဟာ နာဇီရောဂါကို ကုစားဖို့ ( သို့ ) မေ့ပျောက်ဖို့ ကြိုးစားနေ ကြသလို ဂျပန်တွေကလည်း ဖက်စစ်ဝါဒကို ကုစားဖို့ ( သို့ ) မေ့ပျောက်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ဂျာမန်တစ်ယောက်ဟာ ဟစ်တလာဆိုတဲ့အသံ တစ်ယောက်ယောက်ဆီက ကြားလိုက်တာနဲ့ အဲဒီလူဘေးကနေ ထွက် သွားတော့တယ်။ ဥရောပတစ်တိုက်လုံး ဒီလောက် ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ ဂျာမန်တွေက ဘာကြောင့်ဒီလောက် ကောင်းပြနေရတာလဲ၊ " ဥရောပ က ဖြုန်း၊ ဂျာမန်တွေကလျော် " လို့တောင် ဆိုစမှတ်ပြုကြတယ်။ အခြား အကြောင်းတရားတွေလည်းပါမှာပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ နာဇီရဲ့သမိုင်းကြွေးကို တနည်း နည်းနဲ့ ပြန်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ( ဝမ်းနည်းစရာမို့ ဖွင့်မပြောကြပေမဲ့ ) ငြင်းဖို့တော့ ခက်မယ်။
ဂျပန်တွေလည်း အဲသလိုပါပဲ၊ သူတို့ကို ကိုယ်ချင်းစာရင် ( သို့ ) သူတို့နဲ့ ဆက်ဆံရမယ်ဆိုရင် အဲဒီ အနာဟောင်းကို ဒုတ်နဲ့မဆွတာက အပြုသေ ဘာဆောင်နိုင်တယ် ထင်ပါတယ်။ အမေရိက၊ ဥရောပ၊ တောင် ကိုရီယား တို့ဆီ ခရီးစဉ်တွေဆွဲခဲ့ကြတဲ့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ တိုကျိုကို ဘာလို့များ မရောက်ကြသေးပါလိမ့်လို့ ( အမှတ်မှားရင် ထောက်ပြကြပါ ) တွေးမိရင်း ယူကျုကနေ ဝမ်းမင်းရှိုး ရင်ဖွင့်သွားတဲ့ ကျောင်းသားလေးကို အားနာနေမိတော့တယ်။
တွေ့ကြုံသိ၊ ကြားသိ၊ မြင်သိအရ ကမ္ဘာ့စစ်နောက်ပိုင်း အာရှမှာ မိတ်ဆွေရင်း ပီသတာ ဂျပန်ပဲလို့ ခံစားမိလို့ ဒီလောက်အရှည်ကြီးပြန်မိတာ နားလည်ပေးပါ မနန်းဖြူဖြူ ရေ။
ဒါကတော့ ကျနော်ဖတ်မိတဲ့ ဂျပန်အကြောင်းလေးပါ။
ဒါက အင်တာနေရှင်နယ် အသိအမှတ်ပြုမှုလို့ ဆိုရမှာပါ။
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 2/27/2013 - No comments
သင်းကွဲလိပ်ပြာများရဲ့ ရင်ခုန်သံကို ခံစားခြင်း ( ၆ )
in ဇင်ဝေသော်, သင်းကွဲလိပ်ပြာများရဲ့ ရင်ခုန်သံကို ခံစားခြင်း - on 2/26/2013 - No comments
ဒီနေ့ စာအုပ်ကိုကောက်လှန်မိတော့ အမေရိကန် ကဗျာဆရာကြီး ရောဘတ် ဖရော့စ်တ် ရဲ့ အသွင်ကွဲ ရင်ခုန်သံကို ကြားလိုက်ရတယ်။ သူ့စကားလုံးတွေနဲ့ သူ့အယူအဆ တွေဟာ ဘယ်လိုဘာသာပြန်ရမှန်း မသိအောင် ထိလိုက်တိုင်း ထိရှနေတော့တယ်။ ကြည့်ပါ။
Not All There (1936)
About the world's despair,
But to make bad matters worse I found God was not there.
ဘုရားရှင်ကို တိုင်ကြားဖို့ လှမ်းကြည်
ကမ္ဘာမြေရဲ့ ကြေကွဲဖွယ်အတိ အကြောင်း
ထာဝရဘုရားတောင် အဲဒီမှာ မရှိ။
သူ့ရဲ့ ဘာသာရေး အစာမကျေမှုက Not All There မှာ မပြီးသေးတော့ သူ့ရဲ့ကဗျာ " သန့်စင်ခြင်း " ဆီကို ဆွဲခေါ်လာခဲ့ပြန်တယ်။
"To the Clearing "(1962)
Forgive , O Lord,my little joke on Thee
ခွင့်လွှတ်ပါ ဘုရားသခင် ကျနော်မျိုးရဲ့ သေးငယ်တဲ့ အရှင့်အပါ် သရော်မှုကို
ကျနော်မျိုးကလည်း ခွင့်လွှတ်ပါမည် အရှင်ရဲ့ မဟာ ပျက်လုံးကို တဲ့။
" လူမလိုက်တဲ့လမ်း " ကတော့ သူဟာ အသွင်ကွဲတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သိုသိပ်သိပ် ရင်ဖွင့်ထားခဲ့ဟန် တူပါရဲ့။
တောထဲမှာ လမ်းနှစ်သွယ် ဖြန့် ကွဲ.. ပြီးတော့ ကျနော်
လူလိုက်နည်းတဲ့ လမ်းကို ရွေးမိတယ်
ဒါကပဲ ခြားနားခြင်းတွေကို ဖြစ်စေခဲ့ပြီ။
" ခြံစည်းရိုး ပြန်ခတ်ခြင်း " ကဗျာမှာတော့ လူ့စာရိတ္တကို ကဗျာဆရာကြီးက ရယ်သံ အုပ်အုပ်နဲ့ သရော်သွားသံကို ကြားလိုက်ရတယ်။
ဒီကဗျာလေးကိုတော့ မထိရက်လို့ ဘာသာတောင် မပြန်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ တစိမ့်စမ့်တွေးရင်း ခံစားကြည့်ကြပါလား။
Mending Wall ( 1914 )
He only says,"Good fences make good neighbors
Labels: ဇင်ဝေသော်, သင်းကွဲလိပ်ပြာများရဲ့ ရင်ခုန်သံကို ခံစားခြင်း
လီကွမ်းယုပြောပြတဲ့ မြို့တော်အင်္ဂါရပ် ခြောက်ခု ( ၂ )
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 2/26/2013 - No comments
" ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ကြိုတင် တွေးထားရတယ်။ ငါဆိုလိုတာက လူတွေ ကားတွေ သိပ် မဝယ်နိုင်ခင်ကတည်းက ကားပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ ပတ်သက် တဲ့ ဥပဒေတွေ ကြိုတင်ထုတ်ခဲ့ကြရတယ်၊ အဲဒီအချိန်တုန်းက မထုတ်ခဲ့ဘဲ အခုမှသာ ဒီဥပဒေကို ကောက်ထုတ်မယ်ဆိုရင် လူထုနဲ့ ပြဿနာ အကြီး အ ကျယ် မဖြစ်ဘဲ ဒီကားပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေ ဖြစ်ကို မဖြစ်နိုင်ဘူး။ လူထုက သူတို့ကားတွေကို အသိမ်းခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီ ဥပဒေသာ မရှိခဲ့ ရင် တို့လမ်းတွေပေါ်မှာ ကားတွေနဲ့ ပြည့်နေမယ်။ ဒီဥပဒေက အရင်ကတည်း က ရှိခဲ့တာဆိုတော့ မကျေနပ်လည်း သူတို့ဘာမှ ပြောလို့ မရတော့ဘူး ” လီကွမ်းယု။
စင်္ကာပူက အခု စိတ်လက်ချမ်းသာတဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်နေတယ် ။ လေ ယာဉ်တွေကို ကြည့်၊ ငါတို့လေဆိပ်က ထိရောက်မြန်ဆန်အောင်လည်း လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတွေက မြို့တွေနဲ့လည်း ဆက်သွယ် မိနေအောင် စီစဉ်ထားတော့ သူတို့လည်း စိတ်လက်ချမ်းသာကြတယ်။ လေ ယာဉ်ခရီးသည်တွေများ ခရီးတစ်ထောက် နားစရာ ကြုံလာရင် စင်္ကာပူမှာ နားဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ တို့လေဆိပ်က သူတို့ မြို့ထဲကို လည်ကြည့်လို့ ရအောင် အထူးဘက်စ်တွေ အလကား စီစဉ်ပေးတယ်။ မြို့နဲ့ မဝေးတဲ့နေ ရာတွေမှာ ရှိတဲ့ ဟော်တယ်တွေမှာလည်း တစ်ည၊ နှစ်ညတန်သည် တည်းခို လို့ ရတယ်။ ခရီးသည်တိုင်း သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်အောင် တို့က စီစဉ်ပေးထားတာ၊ လေယာဉ်ကွင်းထဲမှာ ရေးချိုးချင်သလား၊ ရသေးတယ်။
အဓိက အရေးအကြီးဆုံး အချက်ကတော့ ဆက်သွယ်ရေးပဲ။ အဲယားလိုင်း အများကြီးဟာ သူတို့ မြို့တော်ကြီးတွေဆီကနေ စင်္ကာပူကို ပျံသန်း လာကြ တယ်။ အဲဒါဟာ ငါတို့ရဲ့ အဓိက အားသာချက်ပဲ။ အဲဒီအဲယားလိုင်းတွေ ကွာ လာလမ်ပူမှာ ဒါမှမဟုတ် ဂျကာတာမှာ သွားပြီး ဆင်းသက်ကြည့်၊ သူတို့ ဌာန ချုပ်တွေကလည်း အဲဒီမြို့တွေကို လိုက်ပြောင်းသွားကြမှာ။ သူတို့ ရွှေ့မသွားအောင် ငါတို့ လေဆိပ်ကိုလည်း သူများလေဆိပ်တွေထက် စွဲဆောင်မှု ရှိနေအောင် ကြိုးစားနေကြမှ ဖြစ်မယ်။
၆။ သာတူညီမျှ ရှိမှု
လူတိုင်းမှာ သာတူညီမျှမှု ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုမျိုးလည်း ရှိနေရမယ်။ မြို့ထဲ က လူတိုင်းဟာ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်မှု ရှိနေရမယ်။ ထိုင်ပေတို့ တောင်ကိုရီးယားတို့က လခစားတွေဆို အိမ်မဝယ်နိုင်ကြဘူး။ ငွေ အများကြီးပေးပြီး ငှါးနေကြရတာ။ ငါ့ရည်ရွယ်ချက်က မိသားစုတိုင်း အိမ် ရှိနေရမယ်။ ဒါမှ သူတို့ လစာတွေထဲက ငွေတွေ ထုတ်ပြီး အိမ်ငှါးခ ပေးရတဲ့ ဘဝက လွတ်မှာ။
သူတို့မှာ အိမ်ပိုင် ရှိတယ်။ ဒါဆို မြို့တော်ရဲ့ အိမ်ယာဈေးတွေ တက်လာတာ နဲ့အမျှ သူတို့ အိမ်ဈေးတွေလည်း တက်လာလိမ့်မယ်။ အိမ်ပိုင် ရှိတဲ့လူက သူ့ အိမ်ဘေးက ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းနေအောင်လည်း ဂရုစိုက်တယ်။ အိမ်ငှါးပြီး နေတဲ့လူက ပတ်ဝန်းကျင် ဘာဖြစ်ဖြစ် ဂရုမစိုက်ဘူး။ သူတို့နေတဲ့ အိမ်ခန်းလေးကိုပဲ ဂရုစိုက်တယ်။
ဒါကြောင့် မိသားစုတိုင်း အိမ်ပိုင် ရှိနေရမယ်လို့ ငါပြောခဲ့တာ။ သူတို့အိမ်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က သန့်ရှင်းလှပနေမယ်ဆိုရင် သူတို့အိမ်ဈေးတွေလည်း တက် လာတယ်။
သူတို့ သားတွေကို စစ်မှုထမ်းဖို့ ငါတို့က ခေါ်ယူကြတယ်။ နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်ဖို့ သင်တန်းပေးဖို့ပေါ့။ သူတို့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မှ မရှိတဲ့လူက ဒီနိုင်ငံကို ကာကွယ်ဖို့ ဘယ် ကြိုးစားတိုက်နေမလဲ။
ဖေဖော်ဝါရီ (၁၆) ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စနေနေ့က ဆရာကြီး လီကွမ်းယုရဲ့ အင်တာ ဗျူးကို အကျဉ်း ပြန်ဆိုထားတာပါ။
သူက မြို့တော်တွေရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ကြည့်ပြီး စင်္ကာပူ အဲသလို မဖြစ်အောင်ဆိုပြီး တည်ဆောက်ယူခဲ့တာလို့ ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ကပ်သီးကပ်သက် ပြန်တွေးမိသေးတယ်။
နိုင်ငံသေးသေးလေးမှာမို့ ဒီလိုလုပ်နိုင်တာပါ ဆိုတဲ့ အဆိုက လက်ခံလို့ ရ သလို လက်မခံလိုလည်း ရပါတယ်။ နိုင်ငံကြီးတွေမှာ ဒီလို ကိုင်တွယ်ဖို့ ခက်ပေမဲ့ နိုင်ငံသေးတိုင်း သန့်ရှင်းရောလား။ သေးခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်းဟာ အီးကွဲဖြစ်နေတဲ့ ဖော်မြူလာတော့ မဟုတ်တန်ကောင်းပါဘူး။ တကယ်တော့လည်း ဒီအချက်တွေဟာ ကြီးခြင်း သေးခြင်းထက် ကာရိုက် တာနဲ့ ပိုဆိုင်ပါတယ်၊ လူတိုင်းမှာ ပမာဏ အကြီး အသေး သိပ်မကွာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွေရှိပေမဲ့ အဲဒီ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လိုထားကြတယ်ဆိုတာတော့ မတူကြပါဘူး။
မြို့တော်ရန်ကုန်ရဲ့ လုံခြုံစိတ်ချရမှု။ ( ကိုယ်တိုင်မေး၊ ကိုယ်တိုင်ဖြေကြည့်ပါ )
ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်က အိမ်တွေရဲ့ ဓနိမိုးချင်း ဆက်နေမှု။ ( ကိုယ်တိုင်မေး၊ ကိုယ်တိုင်ဖြေကြည့်ပါ )
ဘန်ကောက်ရဲ့ လမ်းပိတ်ဆို့မှုကို အကြီးအကျယ် စိတ်ခေါ်နေနိုင်ပြီး ဖြစ်တဲ့ မြို့တော်ရန်ကုန်ရဲ့ လမ်းကျဉ်းကျဉ်း၊ ကားအရေအတွက်များမှု၊ အဆင့်လုံးဝ မရှိသေးတဲ့ လူထုသုံး ကား၊ ရထားစနစ် (Mobility)။ ( ကိုယ်တိုင်မေး၊ ကိုယ်တိုင်ဖြေကြည့်ပါ )
မြို့တော်ရဲ့ သန့်ရှင်းမှု။ အစိုးရရော လူထုပါ ကြိုးစာရဦးမယ်။ အမှိုက်ပုံး ထားတဲ့ စနစ်တောင် ရှုပ်တယ်လို့ ထင်နေကြဆဲ။
မြို့တော်ရဲ့ ပြတ်တောင်းပြတ်ဆောင်း ဆက်သွယ်ရေးစနစ်။ ( ကိုယ်တိုင်မေး၊ ကိုယ်တိုင်ဖြေကြည့်ပါ )
နောက်ဆုံး မြို့တော်ရဲ့ အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်း။ ( ကိုယ်တိုင်မေး၊ ကိုယ်တိုင်ဖြေကြည့်ပါ )
မရောက်ဖူးလို့လား မသိဘူး။ လီကွမ်းယုကြီး ရန်ုကုန်အကြောင်းဘာမှ ပြော မသွားဘူး။
ရန်ကုန်ရဲ့ ကားလမ်းပိတ်ဆို့မှုအတွက် လီကွမ်းယု ပြောသွားတဲ့စကားက အစိုးရပိုင်းက လူကြီးတွေ မှတ်သားထားသင့်တယ် ထင်တယ်။
“ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ကြိုတင် တွေးထားရတယ်။ ငါဆိုလိုတာက လူတွေ ကားတွေ သိပ် မဝယ်နိုင်ခင်ကတည်းက ကားပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေတွေ ကြိုတင်ထုတ်ခဲ့ကြရတယ်၊ အဲဒီအချိန်တုန်းက မထုတ်ခဲ့ဘဲ အခုမှသာ ဒီဥပဒေကို ကောက်ထုတ်မယ်ဆိုရင် လူထုနဲ့ ပြဿနာ အကြီးအကျယ် မဖြစ်ဘဲ ဒီကားပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေ ဖြစ်ကို မဖြစ်နိုင်ဘူး။ လူထုက သူတို့ကားတွေကို အသိမ်းခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီ ဥပဒေသာ မရှိခဲ့ရင် တို့လမ်းတွေပေါ်မှာ ကားတွေနဲ့ ပြည့်နေမယ်။ ဒီဥပဒေက အရင်ကတည်းက ရှိခဲ့တာဆိုတော့ မကျေနပ်လည်း သူတို့ဘာမှ ပြောလို့ မရတော့ဘူး” တဲ့။
Labels: Politics, ဇင်ဝေသော်
in ဇင်ဝေသော်, အမျိုးသားရေး - on 2/25/2013 - No comments
" ဟိုတုန်းကတော့ ဖောင်စီးရင်း ရေငတ် " ပေါ့။
အခု ဘယ်လိုပြောကြမလဲ၊ ရေနံနဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေပေါ်က မှောင်နေတဲ့ နိုင်ငံ တစ်ခု။
ကြာတော့ ကြာပြီ၊ ပင်လယ်ငါးဖမ်း သင်္ဘောသားတစ်ယောက်ပြောတာ ကြားရဖူးတယ်။ ငါးတွေက ထိုင်းရေပိုင်နက်ထဲမှာထက် မြန်မာရေပိုင်နက် ထဲမှာ ပိုများတယ် တဲ့။ သဘာဝအရများတာဖြစ်နိုင်သလို ခေတ်မီ နည်း စနစ်တွေနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် မဖမ်းနိုင်လို့ ငါးတွေပေါနေတာလည်း ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ ထိုင်း ငါးဖမ်းသင်္ဘောတွေဆို မြန်မာရေပိုင်နက်ထဲက ငါးတွေကို ကြည့်ပြီး အသည်းကို ယားနေတာပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါတင်မကဘူး။ သူတို ကပြောတယ်။ မြန်မာတွေက ခေတ်မီနည်းစနစ်တွေနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် မဖမ်းနိုင်တော့ ပင်လယ်ထဲက ငါးတချို့ အသက်ကြီးပြီး သူ့အလိုလို သေ သွားကြတယ်၊ နှမြောစရာတဲ့။ မဟုတ်ဘူး ငြင်းဖို့တော့ ခက်လိမ့်မယ်။
ဒီနေ့ထုတ် စထရိတ်တိုင်းမှာ ရေနံနဲ့ ဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီ အကြီးစား ကြီးတွေ မြန်မာ့ ရေနံနဲ့ ဓာတ်ငွေ့အပေါ် စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ပြေးဝင်လာကြတဲ့ အကြောင်းဖော်ပြထားတယ်။ တော်တော်များများထွက်မယ့်ပုံ ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းနိုင်ပေမဲ့ စနစ်တကျ ခေတ်မီပညာရပ်နဲ့ လေ့လာထားတာ မဟုတ်လေတော့ ဘာမှလည်း တိတိကျကျ မဖော်ပြနိုင်သေးဘူး။ မြန် မာ့ ကျောက်မျက်က ခန့်မှန်းချက်နဲ့ စင်ထရယ် အေဂျင်စီရဲ့ ခန့်မှန်းချက် ကလည်း တော်တော်ကွာတယ်။
ရွာက ဘကြီးစကားငှားရရင်တော့ " အေးလေ၊ မြေကြီးအောက်ကပစ္စည်း ဘယ်သူ အတိအကျပြောနိုင်မှာလဲ " ပေါ့။
ဖြစ်ပုံကတော့ အထက်က ငါးတွေလိုပဲ။ ခေတ်မီနည်းပညာ မရှိတော့ ကိုယ့်မြေထဲရှိတာ ကိုယ်မသုံးရ ဖြစ်နေတာ။ မျောက်အုန်းသီးရထားသလို လို့ပြောရအောင်ကလည်း အားနာစရာ။ အမှန်က ဒီစကားပုံနဲ့က အလိုက် ဖက်ဆုံး။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီကြီးတွေ ဝင်လာရင်တော့ အုန်ံး ရေလေးသောက်ကြရ၊ အုန်းဆံလေး စားကြရ ကောင်းပါရဲ့။ နို့ မိုတော့ ရေနံတွေ ရှိတယ်ကွ၊ ဓာတ်ငွေ့တွေ အလျံအပယ်ရှိတယ်ကွ နဲ့ပဲ အမှောင်ထဲမှာ အုန်းသီးပေါ်ဖင်ခုထိုင်ပြီး
ဗြိတိသျှခေတ်က " ရေနံမြေအလုပ်သမား " ပြဇာတ် ကို ခင်းနေကြရတယ်။
" တို့မှာလည်း ရေနံမြေအလုပ်သမားလုပ်နေရပြီး သားလေးနဲ့ သမီးလေး စာကြည့်ဖို့တောင် ရေနံ ............ "
အခုကော ဘာထူးနေလို့တုန်း။ ထူးတာက
အဲ... ဒီခေတ် ဖောင်သမားမှာ ရေသန့်ဗူး ပါတယ်။
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 2/25/2013 - No comments
ကိုယ်ဝန် အရင့်အမာနဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ပြီး ( coma ) မေ့မြောသွားတယ်။ သူမ သတိပြန်ရလာတော့ ဆရာဝန်ရောက်လာပြီး သူမ မေ့နေစဉ်မှာ ခွဲစိပ်ပြီး ကလေးမွေးပေးခဲ့ရတယ်၊ မွေးလာတာကလည်း အမွှာပူးလေး ၊ ယောက်ျားလေးနဲ့ မိန်းကလေး၊ အားလုံး ကျန်းကျန်းမာမာပဲ ဆို တဲ့အကြောင်း လာ ရှင်းပြ တယ်။
ပြီးတော့ သူမရဲ့မောင် ရောက်လာပြီး ကလေးတွေရဲ့ နာမည်တွေတောင် ပေး ထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဆက်ပြောပြတယ်။
" ကျမမောင်က ဘယ်လိုနာမည်များ ရွေးပေးခဲ့ပါလိမ့် "
" မိန်းကလေးကိုတော့ Denise "
" လှလိုက်တဲ့ နာမည်လေးပဲ၊ သူ့ကိုကျေးဇူးစကားပြောရအုံးမယ်။ ဒါနဲ့ ယောက်ျားလေးနာမည်ကရော "
" Denephew " တဲ့။
( R.D, Apr,2012 )
in ဇင်ဝေသော်, တနင်္ဂနွေ အပျင်းပြေ - on 2/24/2013 - No comments
အမျိုးသားတွေက အမျိုးသာသမီးတွေကို နားလည်မပေးနိုင်တာ ဆိုလို့ နှစ် ချိန်ပဲရှိတယ်။ အဲဒါ
( က ) လက်မထပ်ခင်အချိန်နဲ့
( ခ ) လက်ထပ်ပြီး နောက်ပိုင်းအချိန် တဲ့။
Melissa D Brandon ဆိုတဲ့ အသက် ၂၆နှစ်ရှိ အမေရိကန်အမျိုးသမီးငယ် တစ်ယောက်က အလှမယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ဓာတ်ပုံကို သူမ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ် တင်ပြီး ပိုက်ဆံလိုက်ချူနေလို့ Saskatoon ရှိ တရားရုံးက သူမကို ဖေ့စ် ဘုတ်သုံးခွင့်ပိတ်လိုက်တယ်။
အဲသလိုဆို ဘယ်သူတွေကို ထပ် ပိတ်သင့်သေးသလဲဆိုတော့ မစ္စတာ ဂျင်းမ်က
" Anyone who tagsaphoto on Facebook with the name of someone not in the photo. " တဲ့။
သဘော သိပ်မတူချင်ဘူး။ ဖြစ်သင့်တာက ကျန်းမာရေးအတွက်
( က ) အသက် ၁၆ နှစ်အောက် လူငယ်တွေ
( ခ ) ၁၆ နှစ်အထက် ( ၉၆ နှစ် အထိ လူငယ်တွေ ) ကို ပိတ်သင့်တယ်။
မြန်မာတွေတော့ မပါဘူး။ မီးလာတုန်းလေး သုံးကြရလို့။
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 2/23/2013 - No comments
ကျနော့်သားက သူ့မင်္ဂလာဆောင် ရောက်လာတဲ့ ပရိသတ်တွေကို သူကိုယ် တိုင်ဖျော်ဖြေမယ်ဆိုပြီး ဂစ်တာကြိုးတွေ စ ညှိတယ်။
" မဝတ်စဖူး လက်ထပ်လက်စွပ်ဝတ်ထားရတော့ ဂီတာတီးရာမှာ နည်း နည်းပြဿနာတက်နေလို့ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး နားသောတဆင်ပေးကြ ဖို့ တောင်းပန်ပါတယ် "
သူပြောလို့မှ မဆုံးသေးဘူး။ အောက်က ပရိသတ်တစ်ယောက်က
" နားလည်ပါတယ်၊ လက်ထပ်လက်စွပ်ဝတ်ထားရတယ်ဆိုရင် ဂီတာတီးမှ ရယ်မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘာပဲလုပ်လုပ် ဖြောင့်ဖြောင့်လုပ်လို့ မရတော့ပါဘူး " တဲ့။
Ref: R.D, Dec,2011
အကျဉ်းထောင် အားကစားကွင်း ( ငွေနဲ့ အားကစား )
in ဇင်ဝေသော်, ဘောလုံး - on 2/23/2013 - No comments
ရန်ကုန် မန္တလေးတို့မှာရှိတဲ့ အောင်ဆန်းကွင်းတို့ ဗထူးကွင်းတို့ကို အကျဉ်း ဦးစီး အားကစားကွင်းလို့ နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်ရမယ်ဆိုရင် မြန်မာတွေ ဘယ်လို တုန့်ပြန်လာကြမလဲ။ ဒီခေတ်ထဲမှာတော့ လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြ ကြရမှာပေါ့။
အရင်တစ်ပတ်က Florida Atlantic University က သူ့အားကစားကွင်း နာ မည် ကို GEO group Stadium လို့ နာမည်ပြောင်းပေးခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ဒီ GEO group က ပုဂ္ဂလိက အကျဉ်းထောင်တွေနဲ့ စီးပွားရှာနေတဲ့အ ဖွဲ့ ဖြစ်နေတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး စသည် ပွက်လောရိုက်ခဲ့တာပေါ့။ အဲ့ဒီ GEO group ရဲ့ ချဲယားမန်း George Zoley ဆိုသူက Florida Atlantic University ဘွဲ့ရ ( နှစ်ဘွဲ့တောင် တဲ့ ) ပြီးတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ သန်းလှုဒါန်းခဲ့တယ်။ ငြင်းဖို့ခက်တဲ့ ငွေပမာဏပေါ့။ ဒါနဲ့ပဲ GEO group Stadium ဖြစ်သွားခဲ့ရတော့တယ်။
အားကစားရုံတွေ ပုဂ္ဂလိကနာမည် စပြီးပေးတာလည်း အမေရိကန်တွေပါ။ ၁၉၁၂ ခုနှစ်၊ ဘောစ်တွန်တက္ကသိုလ် အားကစားရုံကို Fenway Park လို့ စတင်အမည်ပေးခဲ့ရာကနေ စခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ အမေရိကန်တွေ ရှေ့ကပြတော့ ကမ္ဘာက နောက်ကလိုက်တယ်။ဒီနေ့ ဆိုရင် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်က Allianz ကစားကွင်းမှာ ကစားနေတယ်။
အာဆင်နယ်က Emirates Stadium မှာ၊
မန်စီးတီးက ၂၀၀၂ ခုက ဓနသဟာယအားကစားပြိုင်ပွဲ အတွက် ဆောက်ခဲ့ တဲ့ ကွင်းကနေ Etihad Stadium ကို ပြောင်းသွားပြီ။
တခါတခါမှာတော့ ဆန္ဒပြမှုတွေ ရှိတတ်တယ်။ နယူးကာဆယ် ဥက္ကဋ္ဌ Mike Ashley က wonga.com ဆီက ထောက်ပံ့ငွေတွေယူပြီး အားက စားကွင်း နာမည်ကို St James' Park ကနေ the Sporting Direct Arena လိုပြောင်း မယ်လုပ်တော့ ပရိသတ်က သပိတ်မှောက်မယ်လို့ ကြုံးဝါးကြတယ်။ ဒါနဲ့ wonga.com က ငွေကြးကိစ္စပဲ ကိုင်တွယ်မယ် ကစားကွင်းနာမည်ကိုတော့ St James' Park လို့ပဲ ထားမယ်ဆိုမှ ပြဿနာ အေးသွားတယ်။ ပရိသတ်က ဘာကြောင့် ဒီလောက်ဖြစ်နေရတာလဲဆို့တော့ အဲ့ဒီ wonga.com က ငွေ တိုးပေး အမြတ်ကြီးစား ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ အားကစားလောက က တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စီးပွားရေး ပိုပိုဆန် လာလေတော့ ဒီပြဿနာကလည်း မကြိုက်ရင်သာနေရမယ် ဒီအတိုင်း ပဲခရီး ဆက်သွားနေပါလိမ့်မယ်။
မယုံရင် ချယ်လ်ဆီး စပွန်စာတွေကိုကြည့်ပါ။ အဲဒီအထဲမှာ ကမ္ဘာ့အမွဲဆုံးနိုင် ငံတွေထဲက တစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ မြန်မာပြည်က ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါတယ်။ အဲ့ဒီ ကုမ္ပဏီက ဂုဏ်သရေရှိအရက်ဆိုင်။ ။
တရံရောက မန်း အကြောင်း ( ရှော့တ်နုတ် )
in စာတိုပေစ, ဇင်ဝေသော် - on 2/23/2013 - No comments
၁၉၉၄၊ ၉၅ ဝန်းကျင်လောက်က ကားလမ်းဘေးအိမ်တွေက အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ သစ်ပင်ငယ်ငယ်တွေကို မိုးကာတွေ၊ ပလပ်စတ်အမည်းကြီးတွေနဲ့ မမြင်အောင် အုပ်ထား၊ ဖွက်( ဝှက် ) ထားတတ်ကြတယ်။
ထူးဆန်းချက်တော့။ ဖြစ်ပုံက ဒီလို။
စစ်ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးက သူလာရင် မန္တလေးတောင်ဝန်းကျင်မှာ သစ်ပင်တွေနဲ့ စိမ်းစိုနေတာ မြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ တဲ့။ မန္တလေး အရာရှိတွေက နေ့ချင်းညချင်း စိမ်းစိုအောင် အိမ်တွေထဲမှာရှိတဲ့ အပင်တွေကို ဖြေထိုးစက်နဲ့ ဝင်ကော်ပြီး မန္တလေးတောင်ဝန်းကျင်က လမ်းဘေးတွေမှာ စိုက်ကြလို့ တဲ့။ ( ဗိုလ်ချုပ် မှုးကြီး ပြန်ရင် ပြန်ပေးမှာပါ လို့ ပြောကြတယ် တဲ့၊ သစ်ပင်ငှားတာ၊ အဲ အမြစ်ပြန်ပါ မပါတော့ အာမ မခံနိုင်ဘူးပေါ့ )
ဒီအသင်းက လည်လည်းလည် ရယ်လည်းရယ်ရ တယ်။ ဆောင်းဝင်ပြီဆိုတာ နဲ့ မန္တလေးတောင် စိမ်းလန်းစိုပြေရေး ပရောဂျက်က သူတို့နဲ့ မဆိုင်သလိုပဲ။ တန်ခူး၊ ကဆုန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ အသစ်ပြန်ထောင်၊ ဘာ လုပ်၊ ညာလုပ်နဲ့ အဲဒီ ပရောဂျက်က အသက်ပြန်ဝင်လာပြန်ရော။ ခဏနေတော့ မိုးတွေရွာလာပြီး မန္တလေးတောင်ကြီးလည်း စိမ်းစိုသွားရော။ ပိုင်တယ်။
အဲဒါက နှစ်တိုင်း။ အခုရော အဲလိုပဲလားတော့ မပြောတတ်ဘူး။
Labels: စာတိုပေစ, ဇင်ဝေသော်
ပြန်ချင်တဲ့ ကွန်မင့်များ ( ၁၀ )
in စာဖတ်သူသို့ပြန်စာ, ဇင်ဝေသော် - on 2/22/2013 - No comments
" hard truths ဆိုတဲ့အတိုင်းသူပြောသမျတွေဟာ နားဝင်ဆိုး နိုင်ပေမယ့် အမှန်တွေကြီး ပဲ၊" မမေဇင်ရဲ့ ကွန်မင့်တစ်ပိုင်းပါ။
" ဒီစာက " Hard Truths " ထဲက မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ပတ်ကျော် သူ ဆေးရုံ မတက်ခင် စနေနေ့က အင်တာဗျူးပါ။ " ( ကမ်းလက် )
စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ ကြိုတင် အသိမပေးတော့ Hard Truths လို့ပဲ ထင်သွားစရာ ရှိပါတယ်။
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခွင့်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး " Hard Truths " နားဝင်မချို အင်တာ ဗျူး မတင်ဖြစ်တာ နှစ်ပတ်ကျော်သွားပါပြီ။ စောင့်ဖတ်သူတွေ သတိထားမိနိုင် မယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်း ရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့ မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ကျနော် သိရသလောက် မြန် မာပြည်တွင်းထဲမှာတော့ စာအုပ်ကောင်းရင် ကောက် ဘာသာပြန်ပြီး ထုတ် လိုက်ကြတာပဲ။ မူရင်း စာရေးသူ၊ ထုတ်ဝေသူတွေဆီက ခွင့်ပြုချက်တွေ လည်း အများအားဖြင့် ( အများအားဖြင့် ဆိုတာ အားနာလို့ပြောတာပါ ) ယူ မနေကြပါဘူး။ အယ်ဒီတာ တစ်ယောက်ကတောင် ပြည်တွင်းမှာထုတ်ဝေတာ ဘယ်သူ့ဆီကမှ ဖြန့်ချီခွင့်တောင်းစရာ မလိုဘူး ပြောနေပါသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျနော့်ပုံစံက တစ်မျိုးပါ။ ကိုယ်ကလည်း စင်္ကာပူမှာ ရှိနေတယ်၊ ခွင့်ပြုချက်တောင်းဖို့လည်း လက်လှမ်းမီတယ်၊ အက်သစ်ကယ်လည်း ပိုဖြစ် တယ်ဆိုပြီး လီကွမ်းယုဆီရယ်၊ မူပိုင်ဖြစ်တဲ့ SPH ( Singapore Press Holding ) ဆီရယ်ကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခွင့် တောင်းခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုခုဆို ကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင်က စလုံးတွေပါ အရှက်ရစရာ ခိုးယူမှုဖြစ်နေလို့လည်း ပါဝင် ပါ တယ်၊ ပြည်တွင်းမှာဆိုရင်တော့ လုပ်မနေပါဘူး၊ အက်သစ်ပြောပြော ဘာပြောပြော။ လီကွမ်းယုရုံးက မီးစိမ်း ချက်ချင်းပြပေမဲ့ SPH ( Singapore Press Holding ) ကတော့ သူတို့လိုချင်တဲ့ ပုံစံနဲ့ ကျနော့်စိတ်ကူး ထပ်တူ မကျလို့ ဆက်ညှိရမယ့်သဘော ရှိနေဆဲပါ။
၁ ။ ကကြိုးလေးထွေနဲ့ အောင်ဆန်းစုကြည် ( စင်္ကာပူလာသင့် မလာသင့် အပါအဝင် )
၂ ။ လီကွမ်းယုရဲ့ နားဝင်မချိုတဲ့ အမှန်တရားတချို့
၃ ။ ဆရာ မောင်စိမ်းနီ ( ပိတောက်ပွင့်သစ် အယ်ဒီတာချုပ် )၊ ဆရာသစ္စာနီ တို့ ကဗျာရှည်နှစ်ပုဒ်နဲ့ ကျနော့်ရဲ့ သစ္စာနယ်အဝင် ခရီးကြမ်း ကဗျာ ရှည်ပေါင်းပြီး ကဗျာရှည်သုံးပုဒ် စုစည်းမှု ကဗျာစာအုပ်ရယ် ထွက်နိုင်ဖို့ ကြိုး စားခဲပေမဲ့ လီကွမ်းယုရဲ့ နားဝင်မချိုတဲ့ အမှန်တရားတချို့ကြောင့် အား လုံး နှောင့်နှေးခဲ့ရပါတယ်။
အထက်က ကိစ္စ ပြန်ဆက်ရရင် ဒီ စာအုပ်ထုတ်ဝေရာမှာ စာရေးသူ ရသင့်တဲ့ စာမူခ ထည့်မတွက်ဘဲ ဖြန့်ချီမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာ အင်တာနေရှင်နယ်ဘောင် နဲ့ နည်းနည်း ကွဲလွဲနေပါတယ်။ ယုံကြည်ဖို့ ခက်နေတာလည်း ပါပါလိမ့်မယ် ။ မြန်မာတစ်ယောက် အနေနဲ့ကတော့ လွယ်လွယ်လေးပေါ့။ စာရေးသူက ၁၅ သို့၂၀ ရာခိုင်နှုံးဆိုပါတော့။ ၂၀၀၀ ကျပ်တန် စာအုပ် တစ်ထောင်ကုန် လို့ လေယာဉ်စရိတ်၊ သွားလာစရိတ်တောင် မကျေပါဘူး။ အဲဒီကိစ္စ ရှင်းနိုင် ရင်တော့ အဆင်ပြေကောင်းပါရဲ့လို့ စိတ်ကူးမိချိန်........
တရုတ်နဲ့ ရုရှားတို့က ဒီ Hard Truths ကို ဘာသာပြန်ခွင့်ပြုဖို့ သံရုံးကနေတောင် တဆင့် တောင်းဆိုကြတယ်လို့ သိလာရပြန်ပါတယ်။ အဲဒါကျတော့ ကိုယ်မလုပ်နိုင်၊ မလုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ Hard Truths နဲ့ ကျနော်နဲ့လည်း " ရွှေပြည်တော် မျှော်လေတိုင်းဝေး " ဖြစ်ရပြန်ပါရော။ အဆင်တော့ ပြေသွားကောင်းပါရဲ့။
ဒါ့ကြောင့် အသိတချို့ကပြောတယ်။ "အရစ်ရှည်တာ၊ မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်နဲ့ ရိုက်ထုတ်လိုက်ရင် စာအုပ်ဖြစ်နေ ပြီ " တဲ့။
ဒီ Hard Truths နားဝင်မချိုကို အွန်လိုင်းပေါ်မှတော့ ဆက်တင်သွားမှာပါ
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 2/21/2013 - No comments
ကားဂိတ်ထဲကနေ အမောတကော ထွက်လာပြီး နာရီကို ကြည့်မိတော့ရထား ထွက်ဖို့က မိနစ်ပိုင်းပဲလိုတော့တယ်ဆိုတာ သိရတော့တယ်။ အပြေးအလွှား လှမ်းကြည့်မိတော့ စီးရမယ့် ဘတ်စ်ကားလည် မမြင်၊ တက္ကစီကိုလည်း မတွေ့ ရဘူး။ ဒါနဲ့ ကားပါကင်ထဲမှာ ရှေတိုးနောက်ဆုတ်လုပ်နေတဲ့ မာစီးဒီး အနက်ရောင် ကားတစ်စီးကိုတွေ့ရလို့ အကူအညီတောင်းမိတယ်။
" ဘူတာဖက်များလမ်းကြုံရင် လိုက်ခဲ့ပါရစေ၊ ရထားမီဖို့ အမြန်လိုနေလို့ပါ "
ကားမောင်သူက ဂျပန်လူမျိုးပါ။ ကျနော့်စကားကိုကြားပြီး သူတုန့်ပြန်မှုက ဇဝေဇဝါမို့ ကျနော့်အင်္ဂလိပ်ကိုနားမလည်ဘူး ထင်လို့ ဖြည်းဖြည်း ထပ်ရှင်းပြမိ တယ်။
ပြီးတော့မှ သူက "တက်" ဆိုတဲ့ အမူအယာပြလို့ သူ့ကားပေါ်တက်လိုက်မိ တယ်။ ကံကောင်းလို့သာပေါ့။ စီရမယ့်ရထားက မီတယ်ဆိုရုံလေး။ ဒါနဲ့ သူ့ကို ကျေးဇူးစကားပြောလိုက်တယ်။
" ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်၊ ခင်ဗျားသွားမယ့်လမ်းနဲ့ ဒီဘူတာက ဆန့် ကျင် ဖက်ကြီး ဖြစ်မနေပါစေနဲ့လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် "
ဒီတော့မှ ပါဖက်ဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်အသံထွက်နဲ့ ကျနော့်ကို ပြန်ပြောတယ်။
" မဖြစ်ပါဘူး၊ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့။ ကျနော်က ကား ပါကင်ထိုးမလို့ လုပ်နေတာပါ " တဲ့။
( အဖြူကောင် အမေရိကန်တစ်ယောက်က ရေးထားတာမို့ ဂျပန်တွေ အားနာ တတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို ထပ်ပြီး အားဖြည့်ပေးနေသလိုပဲ )
Ref: R.D, Oct, 2011.
လီကွမ်းယုပြောပြတဲ့ မြို့တော်အင်္ဂါရပ် ခြောက်ခု ( ၁ )
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 2/21/2013 - No comments
( ဒီ အင်တာဗျူးကလည်း သူတို့ပြောနေကြတဲ့ စက္ကူဖြူစီမံကိန်းနဲ့ ဆက် စပ်နေပုံတော့ရပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဝါရင့်ဆရာကြီးဆိုတော့ ခပ်ပါးပါး ပဲ ထောက်ပြသွားခဲ့တာလို့ မြင်မိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ မြို့တော်အင်္ဂါရပ် ကိုတော့ သဘောကျလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် )
မြို့တွင်းထဲမှာ ဘယ်သွားသွား၊ ဘယ်အချိန်သွားသွား စိတ်ထဲမှာ လုံခြုံစိတ် ချ နေရမယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က ဘယ်လောက်ပဲ လှပနေနေ လုံခြုံမှုမရှိရင် အဓိပ္ပါယ် မရှိဘူး။ နယူးယောက် စင်ထရယ်ပါ့က် (Central Park) ကို ငါ ရောက်ခဲ့တယ်။ စိတ်ထဲမှာ လုံခြုံတယ်လို့ မခံစားခဲ့ရဘူး။
ပြည်ထဲရေးကိစ္စမှာ ရဲတွေက ထိထိရောက်ရောက် အလုပ် လုပ်နိုင်ရမယ်။ ဒါပေမဲ့ ရဲတွေကို နေရာတိုင်းမှာ မမြင်စေရဘူး။ စင်္ကာပူမှာ ရဲစခန်းတွေ ရှိ တယ်။ အဲဒီစခန်းက ရဲဝန်ထမ်းတွေဟာ သူတို့ ပတ်ဝန်းကျင်က လူထုကို သိနေရမယ်။ လူစိမ်းဝင်လာရင်လည်း ဝင်လာမှန်း သိနေရမယ်။ ဒါဆိုရင် ရာဇဝတ်မှုတွေကနေ ကာကွယ်ရာမှာ ပိုပြီး လွယ်ကူသွားမယ်။ မင်းက ဒီရပ် ကွက်က လူ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ရဲဝန်ထမ်းတွေက ဒီရပ်ကွက်က မဟုတ်မှန်း တန်းပြီး သိတယ်။
ဒီနေ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထဲ မနက် (၃) နာရီ ထပြီး အပြေးလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်လို့ရတယ်။ သူ့ကို ဘယ်သူကမှ မဟားဒယား မလုပ်ရဲဘူး။ အဲဒါ မြို့တော်တစ်ခုရဲ့ အဓိက လိုအပ်ချက်ပဲ။
၂။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှိမှု
အရင်ဆုံး ဟောင်ကောင်ကို ကြည့်၊ လူဦးရေက ထူထပ်ပြီး အဆောက် အ အုံ မြင့်မြင့်ကြီးတွေနဲ့၊ လမ်းပေါ်မှာလည်း နေရောင် မရ၊ မြတ်ခင်းစိမ်းတွေ လည်း မရှိ။ ဒါနဲ့ စင်္ကာပူမြို့တော် စီမံကိန်းစတော့ အရင် တစ်မြို့လုံးက အဆောက်အအုံတွေ အားလုံး ဖြိုချပြီး အသစ် ပြန်ဆောက်ကြတယ် ။ ဟောင်ကောင် လို မဟုတ်ဘူး။ တို့က အိမ်တွေကို ဖြန့်ပြီး ဆောက်တယ်။ အိမ်တွေကြားမှာ မြက်ခင်းစိမ်း (သို့မဟုတ်) ကစားကွင်းတွေ ရှိနေတယ်။ ဥပမာ East Cost က Parkway ဆောက်ထားတာကို ကြည့်။ အဲဒီဘေးမှာ သစ်ပင်၊ မြက်ပင်တွေ စိုက်ဖို့ နေရာအလွတ်တွေ ချန်ထားတယ်။ ဒီမူကို စင်္ကာ ပူက ဆက်ထိန်းထားရမယ်။ တို့လည်းအဆောက်အအုံ မြင့်မြင့်တွေတော့ဆောက်ရမှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ သိပ် ကပ်ပြီး ဆောက်လို့တော့ မရဘူး။ ကလေးတွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက် ကစားကွင်းတွေ၊ အပန်းဖြေစရာ နေရာ လွတ်တွေ ရှိနေမှ ရမယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ တိုးတက်ခေတ်မီတဲ့ မြို့တော် ဖြစ် ပါစေ ဒါမျိုးတွေ ရှိနေမှ ရမယ်။ လက်ရှိ အစိုးရ ရင်ဆိုင်ရမယ့် ပြဿနာက ဒီပြဿနာပဲ။
မြို့တော်တစ်ခုဟာ သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေရမယ်။ အဓိက ကူးသန်းသွားလာရေး ပဲ။ ကားလမ်းတွေ ပိတ်ကြပ်နေရင် ဘာမှ လုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ သက်သေ သာဓကအနေနဲ့ ဘန်ကောက်ကို ကြည့်။ ကားလမ်း ပိတ်မိနေပြီဆိုရင် နာရီပေါင်းများစွာ ကြာတယ်။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းကတော့ ကားတင်သွင်းမှု အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားဖို့ပဲ။ ဒါဆိုရင် တစ်နာရီကို အနည်းဆုံး (၂၅) မိုင်တော့ မောင်းလို့ ရမယ်။ ပြီးတော့ လူထုသုံး ဘက်စ် ကားတွေ၊ ရထားတွေရဲ့ အဆင့်အတန်းကို မြှင့်တင်ပေးရမယ်။
ဘက်စ်ကားတွေကို သုံးမလား၊ မြေအောက်ရထားတွေကို သုံးမလားနဲ့ ပတ် သက်လို့ ငါတို့ အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးခဲ့ရဖူးတယ်။ ငါကတော့ ဈေးသက် သာလို့ ဘက်စ်ကားကို ပို သဘောကျတယ်။ နောက်ဆုံး ငါတို့ယုံကြည် သဘောတူညီမှု ရလိုက်တာကတော့ မြေအောက်ရထားက အကုန်အကျ များပေမဲ့ လမ်းပေါ်က ကားရှုတ်ထွေးမှု ပြဿနာကို လျော့ပါးသွားစေနိုင်လို့ ဒါကို အသုံးပြုကြဖို့ပဲ။
မလေးရှားဘက် ရောက်ရင် ခြုံပုတ်တွေပေါ် စွဲနေတဲ့ ကြက်ခိုးလို၊ စက်ဆီချေး လိုဟာတွေကို တွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် ငါတို့ကားတွေ အားလုံးကို ဥရောပ စံချိန် အတိုင်း မီနေအောင်ထားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာ။ မလေးရှားဘက်က အိတ်ဇောတွေ သိပ်ထွက်နေတဲ့ကားတွေဆို စင်္ကာပူထဲ အဝင်မခံဘူး။
ပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း စာနာ နားလည်ရမယ်။ ဆူညံတာတွေ၊ အမွှေးတိုင် ထွန်းတာတွေ၊ ပြီးတော့ ပြာမှုန့်တွေ သာမန်တလင်းပေါ် လွင့်ပျံ့ နေတာမျိုးတွေကို ရှောင်ကြည်ရမယ်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို အမြဲစာနာ တတ်ရမယ်။
ငါ အိုဆာကာကို သွားတော့ စက်ရုံတွေဆီကလာတဲ့ စက်ဆီနံ့တွေ လှိုင်နေ တာပဲ။ ဒါနဲ့ ငါလည်း မဖြစ်ဘူး။ စင်္ကာပူလို ကျွန်းပေါက်စပေါ်မှာ ဒါမျိုးတွေ အဖြစ် မခံနိုင်ဘူးလို့ တွေးလိုက်မိတယ်။ ဒါကြောင့် စက်ရုံတွေဆိုရင် စက် ရုံတွေရှိရမဲ့ နေရာတွေမှာပဲ စည်းကမ်းတကျ ရှိနေရမယ်။ ဒါမှ လေထုသန့်ရှင်း မှု့ ရှိနေမယ်။ လေထုကအစ ညစ်ညမ်းနေရင် နေချင်စရာ မြို့တော်တစ် ခု ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 2/20/2013 - No comments
" ဒီကွန်ပြူတာနဲ့ ဟိုဟိုဒီဒီ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ ဝင်မကြည့်ရင် အင်တီ ဗိုင်းရပ်စ် လည်း ထည့်စရာ မလိုပါဘူး "
" ဘာကြောင့်လဲ "
" အင်တီဗိုင်းရပ်စ် ထည့်လိုက်မှ ဗိုင်းရပ်စ်ကို လမ်းပြခေါ်မိသလိုဖြစ်နေဦးမယ် " ဟု ဆင်းတဲလ်ကနည်းပညာရှင် သောကြာနေ့ က ရောက်လာပြီး ပြောပြ သည်။
အိုင်တီကို သိပ် မသိသည့်အတွက် ပုံသေးကားချတော့ မဆိုဝန့်၊ ယုတ္တိတော့ ရှိသည်ဟုထင်သည်။ စိုးရိမ်လွန်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ကို ကာကွယ်လိုက်မိမှ ထိုမှ တဆင့် ဗိုင်းရပ်စ်လမ်းပေါက်သွားနိုင်သည်။
ကြုံတွေ့နေရသော ဘာသာရေးနယ်မှာတော့ ဤ အတိုင်းဖြစ်နေသည်။ ဘေး အန္တရာယ် ကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီး ဟိုအဆောင်၊ ဒီအဆောင်၊ ဟိုအင်း၊ ဒီအင်း စသဖြင့် ဆောင်ထားတတ်ကြသည်။ အမှန်တကယ် သဘာဝလွန်ပြဿနာ များ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်ကလည်း ထိုပုဂ္ဂိုလ်များသာ ဖြစ်နေတတ်သည်။ ထူးဆန်းတာ မြင်ရ၊ ကြားရ ရှုပ်လှသည်။ သာမန် ဘုရား၊ တရားနဲ့နေသူ များ မှာ ဤ အဖြစ်မျိုး မကြုံရတတ်။
ဤ အကျင့်က တရုတ်၊ မြန်မာ၊ ထိုင်း အာရှသားတိုင်းမှာလိုလိုရှိသည်။
တလောက တရုတ် ဒကာမတစ်ယောက်အိမ်မှာ အရိပ်လိုလိုတွေ မြင်ရ၊ ကြားရသည်ဟုဆိုသဖြင့် သူ့အိမ်သို့ သွားရာ ရှုပ်ထွေးလှသော ဘုရားစင် ကိုတွေ့ရသည်။
ဘယ်နိုင်ငံကမှန်းမသိသော ဘုန်းကြီးပုံ၊ လူပုံများလည်းရှိ၏။ လက်ဖွဲ့များ၊ အဆောင်များလည်းရှိ၏။ ဘုရားဘေးမှာ ရှုပ်လှသည်။
သူမကိုမေးရာ အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဆိုပြီး အသိမိတ်ဆွေများက လက်ဆောင်ပေးထားသည်ဟု ဆိုချေ၏။
ဘာဖြစ်ဖြစ် ဘုရားဆင်းတုတော်ကလွဲရင် လွှင့်ပစ်လိုက်ဟု ဆိုရာ ကြောက်၍ မလုပ်ရဲပါဟု ဆိုလာ၏။ ဘာကိုကြောက်တာလဲဟု ဆက်မေးရာ အရုပ်စောင့် ဝိဉာင်တွေက တစ်ခုခုလုပ်မှာကို ကြောက်တာဟု ဖြေပြန်၏။
ဒါနဲ့များ ဘုရားစဉ်ပေါ်တင်ထားရသလားဟု တွေးမိသေးသည်။ ဒါနဲ့
" လွှင့်ပစ်တဲ့အခါ ဒီဘုန်းကြီးက ခိုင်းလို့ပစ်ရတာပါ၊ မကြေနပ်လို့ တစ်ခုခု လုပ်မယ်ဆို အဲ့ဒီဘုန်းကြီးပဲ သွားလုပ်ပါ၊ လိပ်စာပါ ရွတ်ပေးပါမယ်။ ကျမကိုတော့ ဘာမှ မလုပ်ပါနဲ့ ဆိုပြီး လွင့်ပစ် " ဟု ခပ်သောသော ပြောလိုက်ရာ
" တကယ်လား၊ အဲသလိုဆိုလုပ်ရဲတယ် " ဆိုပြီး ရှိသမျှ အားလုံး အမှိုက်ပုံးထဲ ထည့်လေတော့သည်။ ဘေးက သီရိလင်္ကာရဟန်းငယ်ကတော့ ပြုံးလို့ သာနေ၏။
သူမကို အရင်တပတ်ကတွေ့လို့ မြင်သေး၊ ကြားသေးလားဟု မေးရာ မမြင်၊ မကြားတော့ပါဟုဆိုသည်။ ထိုမှ သီဟနာဒလည်း သက်ပျင်းချနိုင်တော့သည်။
မည်သည့် ဝိဉာင်ကမှ ကျောင်းလာပြီး ကွန်ပလိန်းမတက်သည့်အတွက် သူတို့လည်း ကျေနပ်ပုံတော့ရသည်ဟု ယူဆမိသည်။ ပျော်ရွှင်သူထံမှာ ကွန် ပလိန်းမရှိ၊ မပျော်ရွှင်သူထံမှာသာ ကွန်ပလိန်းရှိတတ်သည် မဟုတ် ပါလော။
သား သမီး ရတနာ
in ဇင်ဝေသော်, သတင်း - on 2/20/2013 - No comments
တစ်ရက်တည်းမှာပဲ Germany: A land without children? ဆိုတဲ့ ဆောင်း ပါးနဲ့ အမေရိကန် မိခင်တစ်ယောက်က ကလေးအမွှာပူး နှစ်ပူး မွေးတဲ့သတင်း အပြိုင်ပါလာတယ်။ လေးယောက်မွေးတာတောင်မဟုတ်ဘဲ ပုံစံတူ နှစ်မွှာမို့ သန်း ၇၀ မှာ တစ်ကြိမ်သာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတယ်လို့ ဆေးပညာရှင်တွေက ဆိုပါတယ်။
မနေ့က ဟောင်ကောင်ရဲ့ လူဦးရေပြဿနာ အကြောင်း ပါမောက္ခ တစ်ယောက်က စင်္ကာပူရဲ့ စက္စူဖြူစီမံကိန်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ရေးသားထားတာ လည်း ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၊ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေက လူတွေဟာ ကလေး မယူချင်ကြတော့ဘူးထင်ပါရဲ့။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ ဂျာမန်တွေ ရှုံးခဲ့ရသလို အခု စိုးရိမ်နေရတဲ့ လူဦးရေထ်ိမ်း သိမ်းမှု စနစ်မှာလည်း အမေရိကန်တွေကပဲ နိုင်မယ့်သဘောရှိနေတယ်။
သူများက တစ်ကြိမ်တစ် ယောက်ပဲ မွေးနေချိန် သူတို့က တစ်ကြိမ်ထဲ လေးေ ယာက်မွေးလိုက်တော့ သူများတွေ တော်တော်လိုက်ယူရမယ့် သဘော။ ဟို ဘေဘီဘုန်းမားခေတ်မှာ မထူးဆန်းပေမယ့် နိုင်ငံတိုင်း လူဦးရေပြဿနာ ကြုံတွေ့နေရချိန် လေးယောက်မွေးလိုက်တာဆိုတော့ တော်တော်တန်ဖိုးရှိမယ်။
အနာဂတ် ဒီမိုဂရပ်ဖစ် ပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ကံဇာတာက အမေရိ ကန်တွေဖက်မှာ ရှိနေပုံ ရပါရဲ့။
ဒီကြားထဲ သူများကလေးတွေကို မွေး စားတဲ့ အမေရိကန် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ဂျိုးလီရဲ့ ဝါသနာက သိပ် မသေးလှဘူး။ လာမယ့် အနှစ် ၂၀မှာ ဂျာမဏီ မလွယ် ဘူး။ ကိုယ်က ကလေးမယူချင်ရင်နေ ဂျိုးလီလို သူများကလေးတွေ ကို မွေး စားတဲ့ဝါသနာပါတဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးရှိရင် ခံသာဦးမယ်။
လီကွမ်းယု နဲ့ မင်ဒဲလား ( သို့ ) မီးနဲ့ ရေ
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 2/19/2013 - No comments
မီးဖိုဘေးမှာ မီလျှံတွေ တရဲရဲနဲ့ ဓားပုံသွင်းနေတဲ့ လီကွမ်းယု ရဲ့ စာအုပ်ကို ဘာသာပြန်နေရင်း မထင်မှတ်ဘဲ၂၀၀၅ ခု က ရီးဒါး ဒိုင်ဂျက် အဟောင်းလေး ကို ပြန်ကိုင်မိတော့ မင်ဒဲလားရဲ့ အင်တာဗြူးလေးကို ထပ်တွေ့ရပြန်တယ်။ သူကတော့ ပူနေတဲ့ ဓားတစ်ချောင်းကို ရေပေါက်လေးတွေ ဖြန်း ရင်း ဖြန်း ရင်း.....ပဲ။ သူ တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီတွေ ကြားမှာ ကျနော်ကိုယ်တိုင် တရှဲရှဲ မည်နေသလိုလို၊ ကြားပဲ ကြားနေ ရသလိုလို မို့ ..........
( R.D )အခု နှစ်တွေအတွင်း ကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အချိန် အတော် သုံးခဲ့တယ်နော်။ ကလေးတစ်ယောက်ကို ပြုစု ပျိုးထောင်ရာမှာ ဘယ် အ ချက်ဟာ မိဘတွေ အတွက် အရေး အကြီးဆုံးပါလဲ။
( Mandela ) ပညာရေး မပါဘဲ ဘဝမှာ ရင်ဆိုင်ရမယ့် အခက်အခဲ တွေ ကို ကျော်လွှားဖို့ မလွယ်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ကလေးကို ပညာပေးဖို့နဲ့ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းထဲမှာ ကိုယ်စွမ်းတဲ့ ဖက်က ပါဝင်နိုင်ဖို့ ပညာပေးသင့်ပါ တယ်။ ကျွန်တော့် ကလေးတွေ မြေးတွေကို မကြာ မကြာ ဒီအကြောင်းတွေပြောမိ ပါတယ်။ ကျွန်တော့် မြေးတွေက တခါတခါ ကျွန်တော့်ထက် တော်နေ တာ တွေ့ရတယ်။
( R.D ) ကလေးတွေဆီက ဘာတွေ လေ့လာခဲ့ရဖူးပါ သလဲ။
( Mandela ) ကိုယ်က ဘဝင်မြင့်နေရင် သူတို့က ပုံမှန် နေရာမှန် ပြန်ေ ရာက်ရောက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ သူတို့က ဘွင်းဘွင်းပဲ ပြောတတ်ေ တာ့ ကိုယ့် အမှားလုပ်ခဲ့တာတွေကို သိတာပေါ့။ သူတို့က သတိပေး နေသ လိုပဲ။
( R.D ) အကြမ်းမဖက် တော်လှန်ရေးနဲ့ မရတော့ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် အာဖရိ ကန် အမျိုးသား ကွန်ဂရက် စစ်တပ်ဖွဲ့ပြီး ဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ တရားမျှတတဲ့ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးဆိုတာ ရှိနိုင်ပါသေးသလား။
( Mandela ) အသားအရောင် ခွဲခြားမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်တို့ဖက် က ဆွေးနွေးဖို့ ကမ်းလှမ်းတာကို အစိုးရက လုံးဝ တွန့်ပြန်မှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆွေနွေးလို့ရအောင် ဒီနည်းကို သုံးခဲ့ရတာပါ။ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာ လက်ရှိ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာကို အခြေခံပြီး ချရတတ်ပါတယ်။
( R.D ) အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ မျိုးချစ်တော်လှန်ရေးကြားက ခြားနားချက်က ဘာပါလဲ။
( Mandela ) မူ အရ လုပ်ခဲ့ရတာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ လတ်တလော ပြဿနာတွေကို အခြေခံပြီး သဘာဝ ကျတဲ့ အဖြေထုတ်နိုင်တဲ့ လူတွေရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားကို မြတ်နိုး ယုံကြည်ပါတယ်။
( R.D )တောင် အာဖရိက သမ္မတအနေနဲ့ သက်တန်းတစ်ခုပဲ ထမ်းဆောင် ခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့ " နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဘယ်အချိန် အာဏာလက် လတ်လွှတ်ရမလဲ ဆိုတာ မသိကြဘူး " လို့လည်း မှတ်ချက်ပေးခဲ့တယ် ။ ရောဘတ် မူဂါဘီ ဆိုရင် ဇင်ဘာဘွေကို အုပ်ချုပ်ခဲ့တာ ၂၅ နှစ်ကျော်ပြီ။ သူ လက်လွှဲပေးသင့်ပြီလား။
( Mandela ) တစ်ယောက်တည်းက အာဏာ အကြာကြီးယူထားရင် ဘယ် လို ဒီမိုကရေစီ အတွက်မှ မကောင်းနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒါက သူ့ နိုင်ငံရဲ့ လူထုက ဆုံးဖြတ်ရမယ့် ကိစ္စပါ။
( R.D ) ကိုယ်တိုင် တွေ့လိုတဲ့ ဆန္ဒ ရှိပါလျှက် အခုထိ မတွေ့ရသေးတဲ့ ကမ္ဘာ သိ လူမျိုးရေး ခေါင်းဆောင်များ ရှိပါသလား။
( Mandela ) လူ့ အဖွဲ့အစည်းကို ကောင်ကျိုး အကြီးအကျယ်ပြုပြီး ကမ္ဘာက သိဖို့ မပြောနဲ့ သူ့ နိုင်ငံကတောင် မသိတဲ့ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား လူစွမ်းကောင်းတွေ အများကြီးပါ။ အဲသလို ပဂ္ဂိုလ်တွေ တွေ့ရပြီဆိုရင်တော့ သူတို့ကို မမေ့နိုင်တော့သလို အထင်ကြီး အားကျ စိတ်ကလည်း တာမရ ဆီးမရ ဖြစ်ရပါတယ်။
( အင်တာဗြူး အကုန်မဟုတ်ပါ )
Reader's Digest, April, 2005
အပျံ သင်နေတဲ့ ကောင်းကင်
in ကဗျာ, ဇင်ဝေသော် - on 2/19/2013 - No comments
ပစ်မှတ်က တကယ် ရဲ တော့
ပင်လယ်က အဲသလောက် လှိုင်းငြိမ်ရင်
အပျံ သင်နေတတ်တယ်။ ။
in ဇင်ဝေသော်, အမျိုးသားရေး - on 2/18/2013 - No comments
ဦးနေဝင်းရဲ့ တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ်က သူဋ္ဌေးတချို့ စင်္ကာပူ ရောက်လာတဲ့အကြောင်း အရင် ဆောင်းပါးထဲမှာ အစချီခဲ့ပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေကို ပြည်သူပိုင် သိမ်းတဲ့ခေတ်မို့လို့ ယူဆစရာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ စင်္ကာပူက တံခါးဖွင့်ဝါဒကို စတင်ကျင့်သုံးခိုက်ဆိုတော့ လူမျိုးစွဲ၊ နိုင်ငံစွဲ သိပ်မရှိတဲ့ သူဋ္ဌေးတွေ ဒီဘက်ကို ရှောင်ထွက်လာကြတာလို့ ယူဆနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ၂၀၀၂ - ခု မတိုင်မီ မြန်မာ့အဲယားဝေးရဲ့ ရှယ်ယာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများပိုင်တဲ့သူဋ္ဌေးက မြန်မာပြည်ကနေ စင်္ကာပူ ရောက်လာတဲ့ စင်္ကာပူရီးယန်း တစ်ယောက်ပါ။ ကျနော်တို့နဲ့ သိပ်ပြီး အလှမ်းဝေး၊ သမိုင်းကိုလည်း စိတ်မဝင်စားလို့ ဒီကိစ္စ ဒီမှာပဲ ရပ်ပါတော့မယ်။
နောက်ပိုင်းကာလမှာတော့ တံငါရွာကနေ ကုန်းထလာနေတဲ့ စင်္ကာပူအတွက် မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာတွေ အစုလိုက်၊ အဖွဲ့လိုက် ရောက်လာကြပြန်ပါတယ်။
၁၈ - နှစ်သားလောက်က ကြားဖူးတဲ့ အဖြစ်အပျက်က မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျန်းမာရေးအတွက် ခွဲစိတ်ကုသဖို့ စင်္ကာပူ ရောက်လာချိန် သူ့ကို ခွဲစိတ်မယ့် ဆရာဝန်က မြန်မာဆရာဝန် ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။ တကယ်ပဲလား၊ ကြံဖန်ပြောကြတာလားဆိုတာ မရေရာလို့ ဒီကိစ္စကိုလည်း ဒီမှာပဲ ရပ်ရပါလိမ့်ဦးမယ်။ ( လတ်တလော စာရင်းအရတော့ စင်္ကာပူကိုလာပြီး ဆေးကုသမှုခံယူတဲ့ တော့ပ် ဖိုက် နိုင်ငံခြားသားတွေထဲမှာ မြန်မာပါနေတယ် )
အခု စင်္ကာပူက မြန်မာတချို့အတွက် တံခါးဖွင့်ပေး လာပြန်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အမျိုးသား သူနာပြု (သို့မဟုတ်) ထားလို အမျိုးသားတွေ အတွက်ပါပဲ။ သူတို့လူမျိုးတွေက ကွန်ပလိန်း ထူပေမဲ့ အစိုးရက ပြည်သူကို တော်တော် ဂရုစိုက်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်ခြောက်နှစ် လောက်ကတည်းက လမ်းကူး ပလက်ဖောင်းတိုင်း ဝှီးချဲယား တွန်းသွားလို့ရအောင် ဆင်ခြေလျှော လုပ်ပေးနေတယ်။ တစ်မြို့လုံး အနှံ့ပဲ။
ဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ခဏနေမှ သတင်းစာမှာ ဖတ်လိုက်ရတာက လာမယ့် ၂၀၂၀၊ ၂၀၃၀ - မှာ ဝှီးချဲယားပေါ် ရောက်လာမယ့် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ပိုများလာမယ်ဆိုတာ ကြိုတွက်ချက်မိလို့ သူတို့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာလို့ သိလိုက်ရပါတယ်။ လေးစားစရာ စီမံကိန်းပါ။
သူ့လူမျိုးတွေ အသက်ကြီးရင့်လာတာရယ်၊ ကလေးမွေးဖွားနှုန်း ကျဆင်းလာတာရယ်ကို အခြေခံပြီး ဒီနေ့ သူတို့ပြောတဲ့ စက္ကူဖြူစီမံကိန်း စခဲ့တော့တာပါပဲ။ စာဖတ်သူတစ်ယောက်က ဒီအကြောင်း ဆောင်းပါးရေးဖို့ ပြောပေမဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးနဲ့ တိုက်ရိုက်ကြီး ပတ်သက်နေတာ မဟုတ်လို့ အာရုံ မကျမိဘူး။
ကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်နေတာက အဲဒီ အမျိုးသား သူနာပြုကိစ္စပါ။ အမျိုးသမီးဆိုတော့ လူနာကို ပွေ့ရာချီရာမှာ အား သိပ်မရှိဘူးပေါ့။ ဒါတင် မကပါဘူး၊ တခြား လူမှုရေးပြဿနာအချို့လည်း မစောင့်စည်းရင် ဖြစ်လာနိုင်ပြန်ပါတယ်။ သူနာပြု ဆိုပေမဲ့ ဆေးရုံသူနာပြုမှ မဟုတ်တာ။ အိမ်မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ အဘိုးကြီး၊ အဘွားကြီးတွေကို သီးသန့် စောင့်ရှောက်ရတဲ့ ကိစ္စပဲ။
အခုတော့ အကွက်မြင်တဲ့ အေဂျင်စီတွေက အမျိုးသား သူနာပြုတွေကို ခေါ်ယူပြီး သင်တန်းတွေ ပေးနေကြတယ်လို့ သတင်းစာမှာ ဖတ်လိုက်ရပြန်ပါတယ်။ မြန်မာတွေဖက်က ကြည့်ရင်လည်း ကိုယ့်နိုင်ငံထက်တော့ ဝင်ငွေကောင်းနေတော့ မလာချင်လှပေမဲ့ လာရမယ့် ခရီးမျိုးတော့ ဖြစ်နေမှာပေါ့။ နောက်ပြီး သက်ကြီးရွယ်အို တစ်ယောက်ကို စောင့်ရှောက်ရတာဟာ စိတ်အခန့်မသင့်တာ၊ အိပ်ရေး ပျက်ရတာမျိုးတွေ ရှိနိုင်ပေမဲ့ နေပူကျဲကျဲထဲ အလုပ်လုပ်ရတာမျိုး မဟုတ်သလို အဲဒီလစာထက်လည်း အနည်းနဲ့အများ ပိုနေမှာပဲလေ။
စင်္ကာပူမှာ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ တိုးပွားလာတာ တို့နိုင်ငံနဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ ထင်စရာ ရှိပေမဲ့ ကမ္ဘာကြီးက ဂလိုဘယ်ဖြစ်နေတော့ ဆိုင်တော့ ဆိုင်နေတာပဲ။ လာမယ့်နှစ်တွေမှာ S-pass ကိုင်ထားတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ အနာဂတ်က သိပ် မသေချာလှပေမဲ့ သူတို့နိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေနဲ့ လိုအပ်ချက်ကြောင့် အမျိုးသား သူနာပြုတွေရဲ့ တံခါးကိုတော့ စင်္ကာပူက လျောလျောလျူလျူ ဖွင့်ပေးလာတော့မှာ သေချာပါတယ်။
တချိန်က မြန်မာ (၁၀) ယောက်မှာ (၈) ယောက်က အင်ဂျင်နီယာ။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မြန်မာ (၁၀) ယောက်မှာ အမျိုးသား သူနာပြုက (၅) ယောက် ဆိုတာများ ဖြစ်လာလေဦးမလား။
တံခါးဖွင့် စီပွားရေးစနစ်အစမှာ သူဌေးတချို့ရလိုက်သလို.....
တံငါရွာကနေ မြို့ပြအကူးမှာ အင်ဂျင်နီယာတွေ ရလိုက်သလို......
ဇရာတရားနဲ့ စင်္ကာပူဟာ မြန်မာသူနာပြုတွေကို အရယူမယ့်သဘောတော့ ရှိနေတယ်။
ဘာပဲပြောပြော သူတို့ဘဝတွေ အဆင်ပြေသွားကြရင် ကျေကျေနပ်နပ် သာဓုခေါ်ကြရမှာပါပဲ။
အဲ … တချိန်က မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်တွေ၊ သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံတွေ၊ ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ ခန်းနားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံဟာ အမျိုးသား သူနာပြုတွေ ထုတ်ပေးနိုင်ရုံနဲ့တော့ ကျေနပ်စရာ မကောင်းလှတော့ဘူးလေ။
ပြုပြင်စရာ၊ ကြိုးစားစရာ များစွာနဲ့ … မြန်မာ။
in ဇင်ဝေသော်, ရသ ဆင်ခြေဖုံး - on 2/17/2013 - No comments
( မင်းတို့လိုကောင်မျိုးတွေဆို ဘယ်နေရာ တွေ့တွေ့ မင်းတို့က စပြီး မခေါ်ရင် မခေါ်နိုင်ဘူး လို့ ရွှတ်နောက်နောက် ပြောခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း သို့ )
-စိတ်ထင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး၊တစ်ခုခုကို မျှော်လင့်မထားရင် နာရီတိုင်းရဲ့ အသွားနှုန်းဟာလည်း အတူတူပဲနေမှာပါ။
-ဘယ်သူ အကြီးဆုံးလည်း မမေးခင်အထိ လူသားအားလုံးဟာ ညီအကိုပဲလို့ ဆိုကြတယ်မဟုတ်လား။
-ဘာရယ် မဟုတ်ဘူး၊ လမ်းမလျှောက်တာ ကြာလို့ လမ်းလျှောက် ကြည့်တာ ပါ။
-တကယ်က လမ်းလျှောက်တာထက် စိတ်လျှောက်နေတာက ပိုမြန်ပါတယ်။
-စိတ်တကယ်လျှောက်နေရင် ခြေလှမ်းတိုင်း၊ အသက်ရှူမှုတိုင်းဟာလည်း အတူတူဖြစ်သွားတယ်။
-အနှေးအမြန် မရှိလည်း လူက ရွေ့နေတယ်။ခြေလှမ်းတွေက လှမ်းနေဆဲ ထင်တယ်။
-ရွာဘက်မှာ ( မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းမှာ ) ငလျင်လှုပ်လို့တဲ့။ ဟုတ်လား။ ဘယ်လောက် စကေးအထိ လှုပ်တာလဲ။
-ဒါတော့ မသိဘူး။ ရွာကလူတွေအတွက် မစိုးရိမ်မိဘူးလား။
- မစိုးရိမ်လှပါဘူး။ ရွာမှာ ငလျင်လှုပ်လို့ တိုက်ပြိုကျပြီး လူပေါ်ပိ သေရအောင် တိုက်မြင့်မြင့်တွေ မရှိဘူး။
-ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိုးတော့ စိုးရိမ်သင့်တာပေါ့။ အင်း ဟုတ်တယ်။ စိုးရိမ်သင့်တယ်။
- ငလျင်လှုပ်လို့ အိမ်ပေါ်က ဝါးလုံးအချင်တွေ ဘာတွေ ပြုတ်ကျရင်တော့ ခေါင်းလောက်တော့ ပေါက်နိုင်တယ်။
- သေလောက်အောင်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
-မဟုတ်ဘူး၊ ဒီနှစ် ငလျင်လှုပ်တော့ မြေဩဇာတွေ ဟာသွားလို့ ပြောင်းဖူးတွေက မချိုဘူး။
-ဟုတ်သလား။ ဒါမျိုးတွေ ရှိသလား၊ ရှိတယ်။ စားကြည့်၊ တကယ် မချိုဘူး။ ချိုပါတယ်။
-ငလျင်လှုပ်တော့ ဒီနှစ် ထန်းရေချိုလည်း မရှိလောက်ဘူး။ ထန်းရေချိုတွေရော အချိုပေါ့သလား။
-ထန်းရေတွေမချိုတော့ရင် ထန်းလျက်တွေလည်း ချိုမှာမဟုတ်တော့ဘူး နော်။
-မဆိုင်ဘူးထင်တယ်။ စကား ကပ်ပြီး မမေးနဲ့။
-မေးတော့ မေးရဦးမယ်။အမှားတစ်ခုရဲ့ အခြေက ကိုယ့်ကြောင့်စတာ၊
-ဒါပေမယ့် အဲဒီအမှားကို အခြေခံပြီး လူနှစ်ယောက်ပျော်ရွှင်နေကြတယ် ဆိုရင် အဲဒီ အမှားကို ၀န်ခံပြီး ပြောပြသင့်လား။
- ပြောပြလိုက်ရင် နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ အပျော်တွေ ရပ်တန့်သွားကြလိမ့်မယ်။
-တကယ် ရပ်သွားမှာလား။ ထင်တယ်။ မရပ်သေးဘူး၊ဆက်လျောမယ်လေ။
- ဒီအတိုင်း ထားရင်လည်း ဘယ်သူ့မှတော့ မထိခိုက်ဘူး။
-အင်းလေ။ တိုက် မြင့်မြင့်ကြီးတွေမှ မရှိတာ။ အလွန်ဆုံးဖြစ်လှ အချင်တွေ ဘာတွေ ပြုတ်ကျလို့ ခေါင်းပေါက်ရုံပေါ့။
- ဘာဆိုင်လို့လဲ။ အခုပြောနေတာ ( စဉ်းစားနေတာ ) ငလျင်အကြောင်း မဟုတ်တော့ဘူး။ အော် ဟုတ်လား။ ရုတ်တရက်ကြီး။
-ရုတ်တရက်ကြီး ကိုယ့်နာမည်တွေ့လိုက်တော့ ဒိန်းခနဲ လန့်သွားတာပေါ့။
-ဟုတ်လား။ နာမည်က အဲလို ကြောက်စရာကောင်းသလား၊ ကြောက်စရာကောင်းရင် နာမည် မမှည့်နဲ့တော့လေ။
-ဘာဆိုင်လို့လဲ၊ မျော်လင့် မထားတဲ့နေရာမှာ မျော်လင့် မထားတာတွေ့ရင် လန့်တတ်တာပဲ၊ ဘာတွေ့တာနဲ့ ဆိုင်ဘူး။
-ဟုတ်လား၊စာမေးပွဲ ဂေဇက်ထဲမှာ ကိုယ့်နာမည် တွေ့လိုက်ရသလိုလား။ မနောက်နဲ့၊ မတူဘူး၊
-အင်း ဟုတ်တယ်၊ မတူဘူး။
-တူတယ်၊ တူတာကိုမဟုတ်ဘူး၊ သူမှ သူ ရယ်၊ အခု နည်းနည်းဝနေလို့။ လှမ်းခေါ်လိုက်ရအောင်လေ။
-မခေါ်ပါဘူး၊ စင်္ကာပူရောက်သွားပြီး ဘဝင်ကိုင်နေလို့ မမြင်ချင်ယောင် ဆောင်သွားတာနေမှာ။
-မဟုတ်လောက်ပါဘူး၊ အရင်ကလည်း သူမြင်ချင်မှ မြင်တတ်တာ၊ အဲလိုစိတ် မရှိလောက်ပါဘူး။
-ရှိရှိ မရှိရှိ သူတို့လိုလူကို ကိုယ်ကစပြီးတော့ နှုတ်မဆက်နိုင်ပါဘူး၊ လက်ဆောင်လိုချင်လို့၊ တစ်ခုခု အကျွေးခိုင်းမလို့ နှုတ်ဆက်တယ်ထင်မှ ဟုတ်ပေ့။
-အရင်က တစ်ယောက်က မမြင်ရင် တစ်ယောက်က လှမ်း ခေါ်တယ်။ အခု.......
Labels: ဇင်ဝေသော်, ရသ ဆင်ခြေဖုံး
စားကြမယ်ဟေ့ ကောင်းကောင်း ( တနင်္ဂနွေ အပျင်းပြေ )
in ဇင်ဝေသော်, တနင်္ဂနွေ အပျင်းပြေ - on 2/17/2013 - No comments
ငါးမန်းသားအဖ ပင်လယ်ထဲမှာ အစာရှာထွက်ကြတယ်။ သူတို့ဘေးမှာ ဝဝ ဖြိုးဖြိုးငါးလေးတွေလည်း ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ ဟိုပြေး ဒီပြေး ဖြစ်နေကြ တာပေါ့။ သား ငါးမန်းက လျှာတပြင်ပြင်နဲ့ စားချင်လှပြီ။
" မစားနဲ့ဦး ငါ့သား၊ ဒီထက်အရသာရှိတဲ့ ငါးတွေကိုတွေ့မှ စားရအောင်။ အခုတော့ ငါတို့ ငါးမန်းတောင်၊ ငါးမန်းစွယ်တွေကို အသားကုန်ထုတ်ပြပြီး တစ်ပတ်လောက် ကူးကြဦးစို့ " ဆိုပြီး ပင်လယ်ထဲဆက်ကူးနေကြတယ်။
" စားချင်ရင် စားလို့ရပြီ၊ ငါးအားလုံးဟာ စောစောကထက် အရသာပိုရှိသွားပြီ " လို့ အဖေငါးမန်းက ပြောတယ်။
" ဖေဖေကလည်း ဒီငါးတွေက အတူတူပဲဥစ္စာ၊ သားတို့တွေ့ခဲ့တဲ့ငါးတွေပဲ၊ ဘာဖြစ်လို့ အရသာပိုရှိသွားရတာလဲ "
" မတူဘူး သားရဲ့။ ငါတို့ ငါးမန်းတောင်၊ ငါးမန်းစွယ်တွေကိုမြင်ပြီး သူတို့ ကြောက်ချေး၊့ ကြောက်သေးတွေပါပြီးကြပြီးပြီ။ ဒီတော့ ပိုသန့်ရှင်း၊ ပိုလည်းအရသာရှိသွားတာပေ့ါ " တဲ့။
သား ငါးမန်းအတွက် ငါးကောင်းကောင်းစားရရေး ပညာတစ်ခု ရသွားတာပေါ့။
( R.D, July,2012 )
မပါလည်း ဖြစ်တဲ့ ဝေါဟာရများ ( ၂ )
in ဇင်ဝေသော်, ခေါင်းစားတတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားလုံးများ - on 2/16/2013 - No comments
သူတို့ဆွဲထုတ်ထားတဲ့ စကားလုံးတွေဟာ အထူးသဖြင့် အမေရိကန် မီဒီယာ ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ တိုင်းမ်တုိ့ နယူးစ်ဝိက်တို့မှာသုံးစွဲလာနေတဲ့ ဝေါဟာရ များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာဝါကျတွေကကို မူရင်းမဂ္ဂဇင်းနဲ့ ဂျာနယ်တွေထဲကပါ။
1 )afew (short) years
2 ) ( general ) public.
This is the first time that the general public has been given the opportunity to determined the content ofaSuper Bowl commercial. ( Times )
3 ) ( information ) report
4 ) knowledge ( base ).
This revelation adds to our knowledge base
5 ) ( live ) operator.
Should you not reach toalive operator please leave your message.
6 ) mired ( together )
7 ) now ( currently )
8 ) on ( the face of ) the earth.
Americans are the most wasteful people on the face of the earth.
9 ) ( period of or point in ) time.
10) ( personal ) opinion
11) ( planned ) strategy
12) (purchase ) price
13) risk ( factor )
14) ( separate ) pieces.
The company owns 152 separate pieces of property.
Labels: ဇင်ဝေသော်, ခေါင်းစားတတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားလုံးများ
ပြန်ချင်တဲ့ ကွန်မင့်များ ( ၉ )
in စာဖတ်သူသို့ပြန်စာ, သီဟနာဒ - on 2/16/2013 - No comments
" ဒို့ကတော့ဝန်ထမ်းဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံမှာမှမလုပ်ချင်ဘူး ကိုယ်ပိုင်အလုပ်က အကောင်းဆုံးပဲလို့ထင်တယ် ကိုယ်ကျိုးစားသလောက်အကျိုးရှိတယ်လေ "
" ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်း ...ချမ်းသာချင်ရင်....လခစားမလုပ်နဲ့ ....စီးပွားရေးလုပ်တဲ့!! "
ဤ ကွန်မင့်လေးနှစ်ခုကိုတော့ သဘောလည်းကျ၊ လေးလည်း လေးစားမိပါ သည်။
ပြဿနာက " ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်း ...ချမ်းသာချင်ရင်....လခစားမလုပ်နဲ့ ....စီးပွားရေးလုပ် " နဲ့ ဆိုတဲ့ ဒုတိယ ကွန်မင့်ပါ။
" ချစ်သားတို့၊ လခစားမလုပ်ကြနဲ့၊ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးပဲ လုပ်ကြ " ဆိုတာမျိုးက မတွေ့ရနိုင်ပါ။
တိုက်ရိုက်ဟောထားတာမျိုး မရှိသော်လည်း သွယ်ဝိုက်ပြီး တွေးယူရဲ လျင်တော့ ဤ အဓိပ္ပါယ်မျိုး ပေါက်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။
စောစောက တင်ထားသည့်  " ငွေတိုးပေးခြင်း ( ဘာသာတရားတို့ အမြင် ) " ကို ညွှန်းချင်ပါသည်။ ဟုတ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်.စီးပွားရေးလုပ်ဟန်ကို အင်္ဂုတ္ထိုရ် မှာ တွေ့ရသည်။
မဖတ်ရသေးသူများ ဖတ်လို့ရစေရန် မူရင်းထဲက သက်ဆိုင်သည့် အပိုဒ်လေး များကို ပြန်ကူးပေးလိုက်ပါသည်။
ဘုရားရှင် ဥပမာပေး မိန့်ဆိုထားတာ အင်္ဂုတ္ထိုရ် မှာ တွေ့ရသည်။
"လူတစ်ယောက်သည် သူ၏ စီးပွားရေးကို တိုးချဲ့ရန် အကြွေးချေးငှါးပြီး လုံး လစိုက်ထုတ်ကာ စီးပွားရေး တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အကြွေးတို့ကိုပေးပြီး မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုပင် ကိုယ် ပိုင်ငွေဖြင့် လည် ပတ်လာနိုင်သည်။ ထို့နောက် သင့်တော်သော မိန်းကလေး တစ်ယောက်နှင့် လက်ထပ်လိုက်သည်။ ထိုအခါ သူသည် 'တစ်ချိန်က ငါ့မှာ အကြွေးများ ရှိခဲ့ သည်။ ယခု အကြွေးမရှိတော့။ အကြွေးမရှိတော့သည့်အပြင် ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးပင် အမြတ်ကျန်ခဲ့သည်' ဟု တွေးကာ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ရ၏" ဟု မိန့်တော်မူသည်။
ထို့အပြင် "လူတစ်ယောက်သည် အသေးစားစီးပွားရေးကို သူတပါးထံမှငွေ ကို ချေးငှါး၍ စတင်နိုင်သည်။ ပေးချေရမည့် အချိန်၌လည်း အတိအကျ ပေးေ ချရမည်။ သို့ဆိုလျှင် လိုအပ်သောအခါ ထပ်မံချေးငှားဖိုလည်း ဖြစ်နိုင်၏" ဟု ယနေ့ စီးပွားရေးဆန်ဆန် ပြောနေကြသော ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ တိကျမှု့တို့ ကို ချီးမွမ်းပြောဆိုတော်မူခဲ့ပြန်သည်။ "
သေချာသည်ကတော့ ဝန်ထမ်းဖြစ်နေလျင် ရဟန်းပြုချင်လျင်ပင် အလုပ်ရှင် က ခွင့်ပေးမှ ရတာမျိုး ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်တော့ ကိုယ်မဝတ် ချင်၊ မဝတ်နိုင်တာပဲ ရှိမည်။ လွတ်လပ်သည်။
လွတ်လပ်၊ လွတ်မြောက်ရေးကို ဘုရားရှင်က အားပေးထားသဖြင့်ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ခြင်း ကိုလည်း အားပေးလောက်တယ် ဟု ယူဆလိုက ယူ ဆနိုင်ပါသည်။
ဘုရားရှင် တိုက်ရိုက်ဟောသည်ကတော့ သမ္မာ အာဇီဝ ဖြစ်ရေးသာဖြစ်သည်။
အနာကုလာစ ကမ္မန္တာ ( သူတစ်ပါးကို မထိပါးစေဘဲ စီးပွားရှာခြင်း )
အနဝဇ္ဇာနိ ကမ္မာနိ ( ကိုယ်လည်း စီးပွားဖြစ်၊ သူတစ်ပါးကိုလည်း ကူညီ ရာ ရောက်အလုပ်မျိုးတို့ ) မင်္ဂလသုတ်မှာ တွေ့နိုင်သည်။
အနာကုလာစ ကမ္မန္တာ ( သို့ ) အနဝဇ္ဇာနိ ကမ္မာနိ လည်းဖြစ် ကိုယ်ပိုင် စီး ပွားရေးလည်း ဖြစ်မည် ဆိုလျင် တံခွန်နှင့် ကုက္ကား ဟု ဆိုရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့်ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးဖြင့် စီးပွားရှာခြင်းကို ဘုရားအားပေးသည်ဟု သွယ်ဝိုက်၍တွေးယူနိုင်သည်ဟု ထင်မြင်သုံးသပ်မိပါ၏။
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 2/16/2013 - No comments
ဇနီးက မီးဖိုထဲမှာအလုပ်ရှုပ်နေချိန် အမျိုးသားက ဧည့်ခန်းထဲမှာ သတင်းစာ ဖတ်နေတယ်။ သူတို့ရဲ့ သုံးနှစ်အရွယ်သမီးလေးကတော့ သူ့ ဖေးဘရိတ် အ ရုပ်လေးတွေနဲ့ကစားနေတာပေါ့။ ဖေးဘရိတ်အရုပ်ဆိုတာ ကော်ဖီကရားနဲ့
ကော်ဖီပန်းကန် အစုံပါ။ ကလေးက သတင်းစာဖတ်နေတဲ့ သူ့အဖေအ တွက် ကော်ဖီဖျော်လာတယ်ဆိုပြီး လာလာချပေးတယ်၊ တကယ်တော့ ရေေ တွပါ။ အဖေလုပ်သူကလည်း သူ့သမီးလေးကစားနေတာကိုကြည့်ပြီး ကျေနပ် မဆုံး တပြုံးပြုံးပေါ့။ လာချပေး သမျှကိုလည်း တော်လိုက်တဲ့သမီးလေးဆိုပြီး သောက်ပေးတယ်။
ခဏနေတော့ သူအမေဘေးမှာ ရှိနေတုန်း သမီးလေးက ကော်ဖီလာတိုက် လို့ သောက်မယ်လုပ်နေစဉ် ဇနီးက သေသေချာချာကြည့်လိုက်ပြီး
" ရှင့်နှယ်နော်၊ ဒါလေးမှမစဉ်းစားမိဘူးလား။ သမီးလေးအရပ်နဲ့ ခပ်လို့မီနိုင် တဲ့ရေက တစ်အိမ်လုံးမှာ အိမ်သာထဲမှာပဲရှိမယ် "
( Ref: R.D.May, 2012 )
ရှားလော့ဟုမ်းနှင့် သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဥ်( အပိုင်း ၂ )
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 2/15/2013 - No comments
စိတ်ပညာသိပ္ပံအရ “Paradox is illusory” ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရှားလော့ဟုမ်း ကိုယ်တိုင်ပင် စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်မှတော့ မလွတ်။ သူ့စိတ်ဖိစီးမှုက ဦးနှောက်မှာ အလုပ်များ၍ မဟုတ်။ အလုပ်မရှိလျှင် မနေတတ် မထိုင်တတ် ဖြစ်သော ခံစားမှုမျိုး ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူ့ဦးနှောက်အတွက် အလုပ်က တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ရှိနေရသည်။
သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်သည် ခံစားမှုဆိုင်ရာ ဦးနှောက် လှည်ပတ်မှုနှင့်သာ ဆိုင်သည်မဟုတ်၊ တစ်ချိန်ထဲမှာ အလုပ်တွေ အများကြီး လုပ်နေရသော Multi-tasking ခေတ်ကြီးထဲ၌ သတိက ပို၍ပင် အသုံးဝင်သည်။ တစ်ချိန်ထဲမှာ ဦးနှောက်က အလုပ်တွေ အများကြီး လုပ်နေရတယ်ဟု သာမန်လူတို့ ထင်ထားသော အယူအဆက မမှန်၊ ဒဏ္ဍာရီသာ ဖြစ်၏။ ဦးနှောက်က တစ်ချိန်မှာ တစ်ခုသာ လုပ်နိုင်၏။
ယခုနှစ်မှာပင် ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ် သုတေသနအဖွဲ့ကလည်း သတိပဋ္ဌာန်နှင့် Multi-tasking ကိစ္စကို တွဲစပ်၍ သုတေသန ပြုခဲ့ကြပြန်သည်။ သူတို့ သုတေသနက ပို၍ပင် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းနေသေး၏။
ထိုအလုပ်စခန်း (Work-shop) သို့ တက်ရောက်သူတိုင်းသည် သူတို့ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အသီးအသီး၌ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ချည်းသာ ဖြစ်ကြသည်။
သူတို့အားလုံးကို ရုံးခန်းတစ်ခန်းစီ၊ တယ်လီဖုန်း တစ်လုံးစီ၊ လက်(ပ်)တော့ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးစီ ပေးထားပြီး စမ်းသပ်ချိန် မိနစ် (၂၀) ဖြစ်သည်။
ရုံးခန်းထဲ ရောက်လျှင်ရောက်ချင်း အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များ၊ အဂျင်ဒါများ၊ သတင်းအချက်အလက် စုစောင်းရန် ကိစ္စများကို ပြုလုပ်ဖို့ တာဝန်ပေးထားသည်။ ထိုတာဝန်များ ပြီးဆုံးဖို့ ကြိုးစားနေစဉ် ကွန်ပျူတာမှာ ဝင်လာသည့် အီးမေးလ်တိုင်းကိုလည်း စစ်ရ၊ (လိုအပ်ပါက) ပြန်ရသည်။ တစ်ချိန်ထဲမှာပင် ဖုန်းဝင်လာပြီး ဖုန်းဆက်သူကို ဖြေကြရပြန်သည်။ ဖုန်းမဆက်၊ အီးမေးလ် မပို့ဘဲ လူကိုယ်တိုင် ရုံးခန်းထဲ ဝင်လာပြီး စကားပြောတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပြန်သေးသည်။ အလုပ်ရှုပ်သည်ဟု ဆင်ခြေပေး၍ မရ။ ပေးထားသော တာဝန်ကို မိနစ် (၂၀) အတွင်း ပြီးနိုင်သမျှ ပြီးအောင် လုပ်ဆောင်ကြရသည်။
ဤက ပထမ ဆက်ရှင် ဖြစ်သည်။
ဒုတိယ ဆက်ရှင်၌ သူတို့အားလုံးကို သုံးစု ခွဲခြားလိုက်သည်။
ပထမအုပ်စုကို သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ် ရှစ်ပတ်ကြာအောင် တရားရှု့မှတ်ခိုင်းသည်။
ဒုတိယအုပ်စုကိုတော့ တရား ချက်ချင်း မထိုင်ခိုင်းသေးဘဲ နောက်မှ အထိုင်ခိုင်းမည်ဟု ချန်ထားလိုက်သည်။
တတိယအုပ်စုကတော့ ခန္ဓာကိုယ် အနားယူခြင်း သင်တန်းများ ပေးပြီး လေ့ကျင့်စေသည်။
သင်တန်းကာလ ရှစ်ပတ်ပြည့်သောအခါ ယခင်နည်းအတိုင်း တာဝန်များကို ပေးအပ် ပြုလုပ်စေခဲ့သည်။
ထိုအခါ သတိပဋ္ဌာန်တရား ရှစ်ပတ်ကြာအောင် အားထုတ်ခဲ့ရသော ပထမအုပ်စုသည် တိုးတက်မှု အရှိဆုံး ဖြစ်လာသည်ကို တွေ့ရှိကြရသည်။ သူတို့မှာ စိတ်ဆိုးခြင်း၊ စိတ်ပျက်ခြင်းများ နည်းသွားရုံသာမက အလုပ်ကိုလည်း သူများတွေထက် ပိုမို အာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြသည်။ အလုပ်ပြီးစီးချိန်ကလည်း သူများလောက် မကြာတော့ပေ။ ကျန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့က အဖွဲ့ဝင်များအတွက် ပြီးစီးရန် စက္ကန့် ၄၀/၅၀ အချိန်ယူရသော အလုပ်တစ်ခုကို သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်ထားသူတို့က စက္ကန့် (၃၀) မျှဖြင့် ပြီးအောင် လုပ်နိုင်ကြသည်။ သူတို့အဖွဲ့အားလုံး လုပ်ဆောင်စရာ ရှိသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ပြီးသည့်နောက် အားလုံးကို ခြုံပြီး အကြမ်းဖျဉ်း တွက်ကြည့်ရာ သာမန်လူ စက္ကန့် (၅၀) ကြာသော အလုပ်တစ်ခုက သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်ထားသူက စက္ကန့် (၃၀) အတွင်း ပြီးအောင် လုပ်နိုင်သည်ဟု တိတိကျကျ တွေ့ရှိကြရသည်။
ထိုမျှမက သူတို့ လုပ်ခဲ့သည့် အလုပ်များကိုလည်း သူများတွေထက် ပိုပြီး မှတ်မိကြသည်။
Emory တက္ကသိုလ်ကလည်း သတိပဋ္ဌာန်နှင့် ဆက်စပ်ပြီး ခံစား၊ တွေးခေါ်မှုတို့ကို အလုပ်လုပ်ပေးသော ဦးနှောက် အစိတ်အပိုင်းကို ဆက်လက် လေ့လာကြသည်။ သူတို့ တွေ့ရှိချက်အရ သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ကို ကျင့်သုံးသူများက အလုပ်တစ်ခုမှ တစ်ခု၊ အာရုံတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ကူးပြောင်းရာ၌ ပို၍ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်နိုင်ကြောင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာတွေမှာလည်း သူများတွေထက် သာလွန်ကြောင်း တွေ့ရှိကြရသည်။
သူတို့ တွေ့ရှိချက်များက ခက်ခဲသော ကိစ္စများ ဆုံးဖြတ်စရာ ကြုံတိုင်း တရားထိုင်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက် ချတတ်သည်ဟု ဆိုသော ဦးသန့်၏ စကားကို အတည်ပြုပေးလျှက် ရှိနေလေသည်။
သူတို့ အဓိက လေ့လာသော အချက်မှာ Default-network ဟုခေါ်သည့် စိတ်အနားယူနေစဉ်မှာပင် ဆက်သွယ်မှု မပြတ်အောင် အလုပ် လုပ်ပေးနေသော ဦးနှောက်၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည်။ သတိပဋ္ဌာန်ကို ပုံမှန် ပွားများနေသူများက ထို Default-network ကို ပိုပြီး ကောင်းမွန်စေသလို သတင်းအချက်အလက် စုစောင်းရာ၌လည်း သူများထက် သာလွန်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိထားမိရာ၌လည်း သူများထက် သာလွန် ကောင်းမွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်ဟု သိရသည်။
သူတို့ကလည်း သတိပဋ္ဌာန်၏ အကျိုးကို ပြရာ၌ ရှားလော့ဟုမ်းကိုပင် ပြန်ပြီး လက်ညှိုး ညွှန်ကြပြန်သည်။
“စိတ် မပျံ့လွင့်သူဟာ ဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင် ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ လက်ပေါ် မေးထောက်ပြီး ဆေးတန်ကြီး ခဲနေတဲ့ ရှားလော့ဟုမ်းလိုပဲလို့ ဖြေရမည်” ဟု ဆိုလာကြပြန်သည်။
“The Valley of Fear” ဟူသော ဝတ္ထု၌ စုံထောက်ဖြစ်သူ Mac က မြို့ရွာအနှံ့ပတ်ပြီး ပျောက်ဆုံးသွားသော စက်ဘီးသမားကို ရှာဖွေ ထောက်လှမ်းခဲ့သည်။ ပိုးသာကုန် မောင်ပုံ စောင်းမတတ် ဆိုသကဲ့သို့ Mac ခင်ဗျာ ခြေသာ တိုသွားသည်။ ဘာ သဲလွန်စမျှ မရခဲ့။ ရှားလော့ဟုမ်းက သူ့အိမ်ထဲမှာ ထိုင်နေရင်း အကျိုးအကြောင်း ဆက်စပ် တွေးခေါ်လိုက်ရာ အမှုခင်း ဖြစ်သွားသော နေရာသာမက လူသတ် တရားခံကိုပါ ရှာဖွေမိလေတော့သည်။
သတိ၊ သမာဓိ ရှိခြင်းရဲ့ အကျိုးဟာ ဘာလဲ မေးလျှင် ရှားလော့ဟုမ်းကဲ့သို့ ကျိုးကြောင်း ဆက်စပ် တွေးရာ၌ ဦးနှောက်စွမ်းရည် မြင့်မားလာခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ရှင်းပြကြသည်။ ရှေးပိုင်း သုတေသနများအရ ဤအချက်ကို လူကြီး၊ လူလတ်ပိုင်းတို့၏ ဦးနှောက်များ၌သာ ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့နိုင်သည်ဟု သိရသည်။ သို့သော် လတ်တလော သုတေသနများအရ သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်နှင့် ဦးနှောက်၏ ဆက်သွယ်မှုသည် အရွယ်သုံးပါးလုံး၌ ဖြစ်နေသည်ဟု သိရှိလာရသည်။ ဤတွေ့ရှိမှုက ၂၀၀၆ - ခုမှ စတင်ခဲ့သည်။ သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ကို စနစ်တကျ လေ့ကျင့်၊ ကျင့်သုံးမည်ဆိုလျှင် (၅) နာရီခန့်မျှ နောက်ပိုင်းမှ စ၍ အကျိုးတရားများ စတင် တွေ့ရှိနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။
ယခုနှစ်မှာပင် အိုဟိုင်းယိုးတက္ကသိုလ်ကလည်း ဤကိစ္စကို ဆက်လက် သုတေသန ပြုကြရာ သတိကောင်းသူတိုင်း၏ Default-network က အခြားသူများထက် သာလွန်ကြောင်း၊ သတင်းများ ပို၍ စုစောင်းနိုင်ကြောင်း ထပ်မံ တွေ့ရှိခဲ့ကြပြန်သည်ဟု သိရသည်။ တွေ့ရှိရသော အကျိုးရလဒ်တို့က အလွန် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှသည်။
ရှားလော့ဟုမ်း၏ အဓိက စွမ်းရည်သည် များပြားလှသော အာရုံကို ဖယ်ခွာ (Detach) နိုင်ပြီး မိမိ စူးစိုက်လိုသော အာရုံတစ်ခုထဲကိုသာ စွဲစွဲမြဲမြဲ စူးစိုက်ထားနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့အတူ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ ပို၍ များများလာသော Multi-tasking ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ၌ လိုအပ်ရာ အာရုံကိုသာ စူးစိုက်ထားနိုင်သော Uni-tasking စွမ်းရည်သည် အလွန်ပင် အရေးပါလှကြောင်း ရှားလော့ဟုမ်းကို ဇာတ်ကောင်တည်ပြီး ရေးသားထားသော ဤဆောင်းပါးကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဝမ်းသာကြစေရန် မှီငြမ်း ရေးသား လိုက်မိသည်။
တစ်ချိန်က မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်သည် ယနေ့ သိပ္ပံစာသင်ခန်းထဲ ရောက်ရှိနေပြီ။ တစ်ချိန်က လောက ရှောင်ခွာရေးကိုသာ အာရုံစိုက်ခဲ့သော ယဉ်ကျေးမှုသည် လောကနှင့် သဟဇာတဖြစ်အောင် နေတတ်ဖို့ သင်ပြသလို ရှိနေသည်။
ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင် လိုအပ်သောတရားကို ရှာတွေ့ပြီးသောအခါ မိဂဒါဝုန်နှင့် ရာဇင်္ဂြီုဟ်စသော လူတောထဲသို့ ပြန်ကြွလာခဲ့သည်ကို သတိမူလျှင် အဖော်မမှီး တစ်ကိုယ်တည်းကိစ္စသည် ပုဂ္ဂလိက ရွေးချယ်မှုသာ ဖြစ်ကြောင်း နားလည်ထားရမည် ထင်၏။
အချို့က တရားထိုင်လျှင် အိပ်ချင်သည်ဟု ဆိုကြ၏။ မိမိကတော့ အိပ်ချင်လျှင်ပင် မဆိုးလှဟု ထင်သည်။ မှန်၏။ အိပ်ခြင်းကတော့ မကောင်း၊ သို့သော် အိပ်မရသဖြင့် အိပ်ဆေးများ သောက်နေသူနှင့် နှိုင်းစာလျှင် ရှု့မှတ်ခြင်းကို အိပ်ဆေးအဖြစ် အသုံးချပါကလည်း လောကသံသရာ အကျိုးယုတ်စရာ မရှိပါ။
ထို့ကြောင့် ယနေ့ကမ္ဘာက သိသော သတိပဋ္ဌာန်သည် နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှိရေး ဆိုသည်ထက် ပစ္စုပ္ပန် စိတ်ဒုက္ခ အေးငြိမ်းရေးကိုသာ ပို၍ ရှေးရှု့နေသည်။ အမှန်ဆိုပါကလည်း ပစ္စုပ္ပန် ပူလောင် လူမှုဒုက္ခကို အေးအေးလူလူ မဖြေရှင်း တတ်သေးလျှင် အံချော်နေသော စိတ်ကူးယဉ် နိဗ္ဗာန်သာ ဖြစ်တန်ရာ ကောင်း၏ဟု။
မပါလည်း ဖြစ်တဲ့ ဝေဟာရများ
in ဇင်ဝေသော်, အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရများ - on 2/14/2013 - No comments
ဘာသာစကားတိုင်းမှာရှိတဲ့ အပို လုံးတွဲတချို့ကို ကြည့်ရင် သူတို့မပါလည်း အဓိပ္ပါယ် အပြည့်အစုံရနေတာတောင် သူတို့ပါမှ ပိုပြီးထိမိတယ် ထင်လာစ ရာဖြစ်လာကြပါတော့တယ်။ အင်္ဂလိပ်မှာ ဥပမာ Right here နဲ့ Right now တို့လိုပါ။ Now ( သို့ ) Here နဲ့ အိုကေနေပေမဲ့ အမေရိကန်တို့ စနက်ကြောင့် Right here ( သို့ ) Right now က ပိုပြီးထိထိမိမိ ရှိလာသလို လိုဖြစ်လာတယ်။
ကွင်းစကွင်းပိတ်ထဲက စကားတွေဟာ စကားတန်ဆာဆိုတာထက် ထူးခြား တဲ့အဓိပ္ပါယ် မရှိပါဘူး။
1 ) ( any and ) all.
ဥပမာ : Any and all information is kept strictly confidential.
ဥပမာ : All information is kept strictly confidential. ဆိုရင် ရနေပါပြီ။
2 ) ( bond ) together
3 ) diverse ( cross section )
4 ) anything or nothing ( at all )
5 ) begins ( promptly )
6 ) career ( path )
7 ) completely ( surrounded )
8 ) ( conclusive ) proof
9 ) ( core ) audience, market, value etc
10) ( delegate ) responsibility
11) Dollar ( amount )
12) ( end ) result
Labels: ဇင်ဝေသော်, အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရများ
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 2/14/2013 - No comments
1 ) ခင်ဗျားမှာ ပန်းသီးတစ်လုံး ရှိတယ်။ ကျနော့်မှာလည်း ပန်းသီးတစ်လုံး ရှိတယ်။ ပန်းသီးချင်း လဲကြမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့မှာ ပန်းသီးတစ်လုံးစီပဲ ရှိနေကြလိမ့်မယ်။
2 ) ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားမှာ အတွေးတစ်ခု ရှိတယ်။ ကျနော့်မှာ အတွေးတစ်ခု ရှိတယ်။ ဒီအတွေးနှစ်ခုကို ဖလှယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ကိုယ်စီမှာ အတွေးနှစ်ခုစီ ရှိသွားမယ်။
၁ ( ၂ ) + ၁ ( ၂ ) = ၄
3) နားလည်မှုရှိတဲ့ နှလုံးသားတစ်ခုစီ အပြန်အလှန် လဲကြမယ်ဆိုရင်ကော ဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်မလဲ။ ဆရာကြီး ဂျော့(ဂ်ျ) ဘားနက်ရှော မပြောခဲ့ဘူး။
အပေးအယူညီမျှတဲ့ ဘဝတစ်ခု ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလား။
( မြတ်ကျော်လွင်နဲ့ သန်းလဲ့ခိုင်တို့ အတွက် အမှတ်တရ )
1,2(ဂျော့(ဂ်ျ) ဘားနက်ရှော)
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 2/13/2013 - No comments
နိုင်ငံခြားသားနာမည်တွေကို မြန်မာတွေ မွေးစားကြသလို ( ဥပမာ မော် ရင်ညိုကို မောင်တင်ညို၊ ဦးစိန်ဘိုးလ်ကို ဦးစိန်ဗိုလ် ) နိုင်ငံခြားသားတွေ လည်း မြန်မာနာမည်တွေကို သူတို့အသံနဲ့တွဲပြီး မှတ်မိအောင် မှတ်ကြရ တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း အဖြူရေးတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖတ်ရဖူးတယ်။
သူတို့ပြောစကားအရ ဂျင်နရယ် " အောင်ဆန်း " ဆိုတဲ့နာမည်ကလည်း မှတ်ရခေါ်ရ တော်တော်ခက်တယ်တဲ့၊ အောင်ဆန်းကို ပြောင်းပြန်လှန်ပြီး သူတို့စကားနဲ့ အန်ဆောင်း( Unsound ) လို့ မှတ်လိုက်တော့မှ အဆင်ပြေ သွားတော့တယ် တဲ့။
သူက ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကို Unsound ( အန်ဆောင်း ) Hero လို့ခေါ် တယ်။ သူများတွေလို ပွဲရှိ၊ ရှေ့ထွက် လူသိမများလှဘဲ နောက်ကွယ်က နာမည်မထွက်တဲ့ လူစွမ်းကောင်းပေါ့။ မိုက်ပါတယ်။
"ကျား၊ မ" မရှိတော့တဲ့ စကားလုံးများ
in ဇင်ဝေသော်, ခေါင်းစားတတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားလုံးများ - on 2/12/2013 - No comments
ရာထူး၊ အလုပ်အကိုင်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ခပ်တဲတဲကျန်နေတဲ့ ကျား၊ မ ဝေါဟာရကွဲတွေက
ကျန်တဲ့ နေရာတွေမှာ ကျား၊ မ အသာထား " person " တောင် သုံးစွဲနေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
teacher တို့ doctor တို့နောက်ကို တညီတညွတ်တည်း လိုက်ပါနေကြပါပြီ။
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 2/12/2013 - No comments
မြွေနှစ်က အနုပညာ၊ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိတယ်လို့ ဆိုရပါ လိမ့်မယ်။ မြွေနှစ်မှာ မွေးဖွားတဲ့ ကမ္ဘာသိသူတချို့နဲ့ ကမ္ဘာ့ဖြစ်စဉ်တချို့ကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၁။ အေဗရာဟင် လင်ကွန်း၊ အမေရိကန် သမ္မတ။ ( ၁၈၀၉-၁၈၆၅ )
၂။ ဂျွန် အက်ဖ် ကနေဒီ၊ အမေရိကန် သမ္မတ။ (၁၉၁၇-၁၉၆၃ )
၃။ မော်စီတုံး၊ တရုတ် ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်။ ( ၁၈၉၃-၁၉၇၆ )
၄ ။ ရှီ ကျင်းပိုင်၊ လက်ရှိ တရုတ် ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်။ ( ၁၉၅၃- )
၅ ။ ကိုရီးယား ဂန်းနန်းစတိုင် ရပ်ပါ ပီအက်စ်ဝိုင်နဲ့ ( ၁၉၇၇- )
၆။ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး အော်ဒရီကဟ်ပ်ဘန်း တို့လည်း (၁၉၂၉-၁၉၉၃) မြွေတွေပါ။
၁။ အက်ဒမန် ဟီလာရီနဲ့ တန်ဇင် နော်ဂေးတို့ အေဝရက်တောင်ပေါ် ခြေခြနိုင်။
၂။ ဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင် ဂျိုးဇက် စတာလင် သေဆုံး။
၁။ ပထမဆုံး အမေရိကန်စစ်သားများ ဗီယက်နမ်မြေပေါ်ရောက်။
၂။ စင်္ကာပူ လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
၁။ တိန့်ရှောင့်ဖိန် အာဏာပြန်ရ။
၂။ တစ်ကမ္ဘာလုံး ကျောက်ရောဂါ ပပြောက်ခဲ့။
၁။ တရုတ်ပြည် ဒီမိုကရေစီရရှိရေး ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုဖြစ်။ အသက်ပေါင်းများစွာ စတေးခဲ့ရ။ ( Tiananmen Square Revolution )
၂။ ဘာလင် တံတိုင်းကြီးပြိုကျခဲ့။
၁။ အမေရိကရှိ ဝေါထရိတ်စင်တာနဲ့ ပင်တဂွန်ကို အကြမ်းဖက်သမားတို့ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်၊ လူပေါင်း သုံးထောင်ကျော်သေဆုံး။
၂။ အမေရိကန်တို့က အရှေ့အလယ်ပိုင်းကို ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်။
Source: Daily mail.co.UK..AFP
in ဇင်ဝေသော်, ရသ ဆင်ခြေဖုံး - on 2/11/2013 - No comments
“ထား” ဆိုတာ သူမနာမည် မဟုတ်သလို “ထား” လို့ ခေါ်တယ်ဆိုတာကို လည်း သူမကိုယ်တိုင်ကတောင် မသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုခု၊ တစ်ယောက်ယောက်၊ တစ်စုံတရာကို ထားခဲ့ရမယ်ဆိုတာ သေချာသွားလို့ သူမကို “ထား” လို့ စိတ်ထဲမှာ ခေါ်လိုက်မိတာပါ။ ထားက အသားညိုတယ်၊ မျက်နှာချိုတယ်၊ စိတ်ရင်း ဖြူတယ်၊ တိုင်းရင်းသားလေသံ နည်းနည်း ဝဲတယ်။ နယ်က၊ ရွာလေး တစ်ရွာကပါ။
သူမနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အမကြီးတစ်ယောက်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ထားကိုကျနော် သိခဲ့ရတာ။ သူမ စင်္ကာပူကို ရောက်လာခဲ့ရတာက လူအိုရုံမှာ သူနာပြုအကူ (နာ့စ်) တစ်ယောက်အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ဖို့ ရောက်လာခဲ့တာပါ။ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ သိပ်ဆန်သွားမှာစိုးလို့ လစာကို မမေးမိပေမဲ့ စင်္ကာပူဒေါ်လာ လေး ရာနဲ့ ငါးရာကြားမှာ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ အကြမ်းဖျင်း တွက်ဆလို့ ရပါ တယ် ။ နေစရိတ်နဲ့ စားစရိတ်က အလုပ်ရှင်က တာဝန်ယူထားတာရယ်၊ အပြင် ထွက်ခွင့် သိပ်မရတာရယ်၊ ကွန်ပျူတာ အင်တာနက် သုံးခွင့် မရတာ ရယ်ကြောင့် သူမရတဲ့ လစာလေးထဲကနေ ယိုဖိတ်စရာ အပေါက်တော့ သိပ် မရှိနိုင်ပါဘူး။
သူမ စိတ်လိုလက်ရ ရှိတုန်း ပြောပြလို့ သူမအကြောင်း သိလိုက်ရတာက သူမမှာ (၆၅) နှစ် ကျော်နေပြီး ဖြစ်တဲ့ မိဘနှစ်ပါးလုံး ရှိသေးတယ်။ အမကြီး တစ်ယောက် ရှိတယ်။ သူမ အမကြီးကတော့ သူ့အိမ်ထောင်နဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့။ မိဘကို လုပ်ကျွေးခွင့်ရအောင် စင်္ကာပူကို အရဲစွန့်ပြီး တစ်ယောက်တည်း ထွက်လာခဲ့တာ။ ဒါပါပဲ။ အဲ … သူမရတဲ့ လစာလေးထဲ ကနေ တစ်လကို ဒေါ်လာနှစ်ရာ မိဘတွေဆီ ပုံမှန် ပို့ပေးတယ်။
သူမ ပြောပြတာက ဒါအကုန်ပေမဲ့ ကျနော့်အတွေးက ကုန်မသွားခဲ့ဘူး။ မိဘတွေကို ထောက်ပံ့ဖို့ ထွက်လာခဲ့တော့ မိဘတွေကို ပြုစုခွင့် သူမ လက် လွှတ်ခဲ့ရတယ်။ သူမက လူအိုရုံမှာ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို စောင့်ရှောက်နေ ရချိန်မှာ သူမရဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို မိဘနှစ်ပါးကို ဘယ်သူက စောင့်ရှောက်နေ မလဲ။ သမီးကြီးကလည်း သူ့အိမ်ထောင်နဲ့သူ၊ သူ့ကလေး နှစ်ယောက်နဲ့သူ၊ မိဘနှစ်ပါးအတွက် အချိန်ပေးနိုင်မယ် မဟုတ်ဘူး။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီ ဇနီးမောင်နှံဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဖေးမ ရင်း စောင့်ရှောက်လို့ ပဲ နေကြရလိမ့်မယ်။
ဒါဟာ သူမကို “ထား” လို့ ခေါ်မိခြင်းရဲ့ ပထမ အကြောင်းတရားပါ။
တစ်လကို ဒေါ်လာနှစ်ရာ ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ ကိုယ်ပိုင် မိဘတွေကို “ထား” ခဲ့ရပြီး ကိုယ့်မိဘ မဟုတ်တဲ့ သူစိမ်းတစ်ရံ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို ရပ်ဝေးမြေခြား လာပြီး စောင့်ရှောက်နေရလို့ ထားလို့ ခေါ်မိတာပါ။
ဒီအသက်၊ ဒီအရွယ်ဆိုတော့ ချစ်သူတွေ ဘာတွေလည်း သူမမှာ ရှိနေနိုင် ပြီပေါ့။ စင်္ကာပူကို အရဲစွန့်ပြီး တစ်ယောက်ထဲ ထွက်လာခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်မှာ ချစ်သူနဲ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ အတူတူ နေရဖို့ဆိုတဲ့ အိပ်မက်ကို လည်း ထားခဲ့ရမှာပေါ့။ ဒါဆို သူမနာမည်က “ထား” ဆိုတာထက် “ထားထား” လို့တောင် ခေါ်ဖို့ သင့်နေပြန်ပါပြီ။
တစ်လကို ဒေါ်လာနှစ်ရာ မိဘတွေဆီ ပို့ပေးတယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့ ဒေါ်လာနှစ် ရာလောက်ကို သူမချစ်သူနဲ့ နီးစပ်ဖို့ ကြိတ်ပြီးတော့များ စုစောင်းနေရှာမလား။ စတင် တွေ့ရှိချိန်ကစလို့ ချစ်စရာ၊ ခင်စရာကောင်းတဲ့ ထားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖြူ စင်စွာ တွေးကြည့်ခဲ့မိပါတယ်။
ကျနော်သိတဲ့ “ထား” ဟာ စိုင်းထီးဆိုင် သီချင်းထဲက ထားမဟုတ်သလို တစ်ပြည်သူ မရွှေထားထဲက ထားလည်း မဟုတ်ရှာဘူး။ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို ပြုစုရတာဟာ ကုသိုလ်ရတဲ့ အလုပ်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်ပီပီ နှလုံးသွင်းထားမှာ ဖြစ်သလို ကိုယ့်မိဘတွေကို ပြုစုခွင့်နဲ့ အကြောင်း မလှစွာ လွဲချော်နေရတာကိုလည်း သူမ ကြိတ်ပြီး ကြေကွဲနေရှာမှာပါ။
ကျနော်သိတဲ့ “ထား” လို ထားတွေ စင်္ကာပူမှာ ဘယ်နှစ်ယောက်များ ရှိနေ မလဲ???
အရင်တစ်ပတ်ကပဲ ထားနဲ့တွေ့တော့ သူ ရွာပြန်တော့မယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောပြပါတယ်။
“ဘာ ဖြစ်လို့လဲ၊ ဒီမှာ အဆင်မပြေလို့လား”
“မဟုတ်ပါဘူး။အဆင်ပြေပါတယ်။အရင်တုန်းက အေးဂျင့်ကို ပေးစရာတွေကလည်း မကျေသေးတော့ ဒါတွေကျေအောင် ကြိတ်မှိတ်ပြီး လုပ်နေရတာပေါ့။ အခုတော့ ကျေသွားပါပြီ။ စိတ်လည်း ပေါ့သွားတယ်။ ဒေါ်လာလေး သုံးလေးရာနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို မိဘနှစ်ပါးကို စောင့်ရှောက်သူ မရှိဘဲ ပစ် ထားခဲ့ရတာကို စိတ်လည်း မကောင်းပါဘူး။ ရှိတဲ့ပိုက်ဆံလေးနဲ့ ရင်းနှီး စားသောက်ပြီး မိဘတွေနားမှာပဲ နေသင့်တယ် ထင်လို့ ပြန်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်တာပါ”
စိတ်ထင်မှ ပြောတတ်တဲ့ ထားဟာ ဒီတစ်ခါတော့ ရှည်ရှည်မျောမျောကို ရှင်းပြရှာတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ “ထား” ဟာ ကျနော်နဲ့အတူ စင်္ကာပူကိုပါ ထားခဲ့ဖို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်ပါတော့တယ်။ ကျနော်ကတော့ ထားအတွက်၊ ထားမိဘနှစ်ပါးအတွက်၊ အကယ်၍ စောင့်နေသူ ရှိခဲ့ရင် ထားချစ်သူအတွက် ဝမ်းသာမိပါတယ်။
အဲ သူမ “ထား” ခဲ့သမျှတွေထဲမှာ ဒီတစ်ခါ ထားခဲ့ခြင်းဟာ ပိုပြီး အဓိပ္ပါယ် ရှိတယ်လို့လည်း တွေးနေမိတယ်။ မှန်ချင်မှတော့ မှန်မှာပေါ့။ ထားခဲ့ပါ ထားရယ်။ ထားခဲ့ရမယ့် အရာအားလုံးဟာ ထားကို ထားခဲ့ရမှာပဲ မဟုတ်လား။
အထားခံရတဲ့ ကျနော်က ဝမ်းသာမိသလိုမျိုး နောက် အထားခံလိုက်ရတဲ့ စင်္ကာပူကရော ဝမ်းသာနိုင်မလား။ ဒီကိစ္စကို သေသေချာချာ မသိဘူး။ စင်္ကာပူက “ထား” တို့လို မိန်းကလေးတွေကို တကယ် ထားချင်ပါတယ်။
သူတို့ မလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တွေကို ထားတို့က လာလုပ်ပေးနေလို့ပဲပေါ့။ သူမကို ထားချင်တဲ့ စင်္ကာပူကို ထားခဲ့ပြီး “ထား” တစ်ယောက် ပြန်သွားခဲ့ တယ်။
မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ လာလို့၊ ပြန်လို့ အကြိုအပို့ မလုပ်တတ်တဲ့ ကျနော်ဟာ ထားပြန်တဲ့နေ့က ချန်ဂီလေဆိပ်ကို လိုက်ပို့လိုက်မိတယ်။ “ထား” ပြီး ပြန်သွားတဲ့ “ထား” ကို ဂုဏ်ပြုဖို့ပါ။
အဲဒါ အဖြူထည် ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့ ကျနော်သိတဲ့ “ထား” ပါပဲ။
“ထား” မှ ရယ်လို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ အားလုံးလည်း ထားခဲ့ရမှာ မှန်သမျှကို ထားခဲ့ကြရဦးမှာပဲ မဟုတ်လား။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီနေ့က ချန်ဂီလေဆိပ်မှာ တမာရနံ့လိုလို ဘာလိုလို ရနံ့ တစ်ခု တောင် ခပ်သင်းသင်းရလိုက်မိတယ်။
in ဇင်ဝေသော်, တနင်္ဂနွေ အပျင်းပြေ - on 2/10/2013 - No comments
ကြွက်ကို နိုင်တဲ့နည်းက ကြောင်မဟုတ်သလို မြွေလည်း မဟုတ်ပါ။မြို့တော် ခန်းမရယ်၊ ကုန်စုံဆိုင်ရယ်၊ ချပ်ကျောင်းရယ်မှာ ကြွက်တွေ တော်တော်ေ သာင်းကြမ်းနေတယ်။ ဘာကြောင့်ကြွက်တွေ ဒီနေရာတွမှာ ပေါနေတာ လည်းဆိုတာတော့ မသိရပါ။
မြို့တော်ခန်းမကတော့ ကြွက်နှိမ်းနင်းရေး အနေနဲ့ ကြောင်တွေကို မွေးထား လိုက်တယ်။ အစပိုင်းမှာ ဟုတ်မလိုလိုနဲ့ နောက်ပိုင်းကျ ကြွက်မခုတ်တော့တဲ့ အပြင် သူတို့ မစင်တွေကပါ ဒုက္ခထပ်ပေးနေလို့ ကြောင်တွေကိုမောင်းထုတ် လိုက်ရတယ်။ ကြောင်မရှိတော့ ကြွက်တွေက အရင်ကအတိုင်းပဲ ပြန် လည်သောင်းကြမ်းနေကြပြန်တယ်။
ကုန်စုံဆိုင်ကတော့ လူတွေကိုယ်တိုင် ထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းပြီး နှိမ်းနင်း တယ်။ မရပါဘူး။ ကြွက်ကောင်ရေက ဆတိုးတက်လာသလားတောင်ထင် ရတယ်။ ဒါနဲ့ လက်လျှော့လိုက်တော့ ကြွက်တွေက အရင်ကအတိုင်း ပဲ ပြန်ဖြစ်လာတယ်။
ချပ်ကျောင်းကတော့ ရှိရှိသမျှ ကြွက်တွေကို ခရစ်ယန်တွေဖြစ်အောင် အား ကြိုးမာန်တက် စည်ရုံးလိုက်ကြတယ်။ သူတို့အလုပ်ဖြစ်သွားတယ်။ ခရစ်ယန်ဖြစ်သွားတဲ့ ကြွက်တွေဟာ တစ်နှစ်မှာ နှစ်ကြိမ်ပဲ ချပ်ကျောင်း ထဲ ပြန်လာကြတော့တယ်။
အဲဒါ အီစတာပွဲတော်နေ့နဲ့ ခရစ္စမတ်နေ့ပဲ။ ကျန်တဲ့နေ့တွေမှာဆို ကြည့်ချင် လို့တောင် မမြင်ရတော့ဘူး တဲ့။
Ref: R.D, Dec, 2009
in သီဟနာဒ, အမှတ်တရ - on 2/09/2013 - No comments
ဤကျောင်းမှာ နှစ်စဉ် တရုတ် နှစ်သစ်ကူးနေ့တိုင်း ည ၁၂ နာရီမှစတင်ကာ မဟာသမယသုတ်နှင့် မေတ္တသုတ်ကို ရဟန်းတွေရော လူများပါ စုပေါင်းပြီး ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြသည့် အစဉ်အလာရှိခဲ့သည်။ ပျံတော်မူသွားခဲ့သည့် သီရိ လင်္ကာဆရာတော်ကြီး ချမှတ်ပေးထားခဲ့သည့် အဓိပ္ပါယ် ပြည့်ဝသော နှစ် သစ်ကြိုဆိုမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်က မြွေနှစ်ဟု သိရသည်။ သူ့နေ့နှင့်သက်ဆိုင်ရာ သုတ်တော်များကို လပြည့်နေတိုင်း ရွေးချယ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြရာ မြွေနှင့်ဆိုင်သော သုတ္တန်ရော မရှိဘူးလား မေးလာသဖြင့် ခန္ဒသုတ်ကို ညွှန်းဆိုလိုက်ရသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့ နှစ်သစ်ကူးချိန် ယနေ့ည၌ မဟာသမယသုတ်၊ မေတ္တသုတ်တို့အပြင် ခန္ဒသုတ်ကိုပါ ပေါင်းထည့် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြမည်။
မြွေဟုဆိုသဖြင့် ခန္ဒသုတ်နှင့် အဆင်ပြေသွားသည်။ အခြား ကြက်၊ဝက်၊ ဆိတ် စသော နှစ်များဆိုလျင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ ဟု စဉ်းစားမိသေးသည်။
သေသေချာချာ စဉ်းစားလိုက်မှ ခန္ဒသုတ်ဟူသည် မြွေသာ မောင်ပိုင်စီးလို့ရ သည့် အိတ်ကလူးစစ်သုတ် မဟုတ်။
အခြေမပါသော သတ္တဝါ၊ အခြေနှစ်ခြောင်းပါသော သတ္တဝါ၊ ၊ အခြေလေးခြောင်းပါသော သတ္တဝါ၊ ခြေထောက်များစွာရှိသော သတ္တဝါဟု ဆိုထားသည်။ တကယ်ဆို ဘယ်သတ္တဝါပဲ လာလာ ခန္ဒသုတ်သုတ်နှင့် အလုပ်ဖြစ်သည်။
ခန္ဒသုတ်သုတ်၌ မလာသည်က အခြေသုံးခြောင်းပါသော သတ္တဝါသာဖြစ် သည်။ အခြေသုံးခြောင်းပါသော သတ္တဝါလည်း တရုတ်နှစ်များတွင် မရှိလောက်ဟု တွေးမိကာ စိတ်သက်သာရာတော့ ရလိုက်မိ၏။
တရုတ်မျိုးနွယ် စာဖတ်သူတိုင်အတွက် ပျော်ရွှင်သော နှစ်သစ်ဖြစ်ကြပါစေဟု ဆုတောင်းပေးပါ၏။
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 2/09/2013 - No comments
1 ) " ing " နဲ့ ရေးထားရင် ပြုလုပ်ဆဲ၊ ဖြစ်ဆဲလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ် တဲ့။ " building " ကို ဘယ်လိုပြောမလဲ။ ဆောက်ပြီးလို့ အိမ်ဖြစ်နေတာတောင် " ing " မပျောက်သေးဘူး။
2 ) မျက်နှာသုတ် တဘက်ကိုယ်တိုင်က လျှော်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင် အဲဒီတဘက်မလျှော်ခင်က သုတ်ထားတဲ့မျက်နှာကရော ဘယ်လောက် သန့်နိုင်မှာတဲ့လဲ။
3 ) Why do they call itashipment when it goes inacar,
but cargo when it goes inaship?
( R.D, June 1923 )
လွယ်လွယ်ပြော ရသားနဲ့ ( အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရများ ) နှစ်
in ဇင်ဝေသော်, အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရများ - on 2/09/2013 - No comments
လွယ်လွယ်ပြော ရသားနဲ့ဆိုပေမဲ့သတင်းကိုသတင်းလိုပဲရေးတတ်ကြ ပြီး ဆောင်းပါးတွေကိုတော့ ဆောင်းပါးဟန်နဲ့ပဲ ရေးကြရပါတယ်။
သတင်းက လူတန်းစားအစုံကိုရည်စူးပြီးရေးတော့ လွယ်နေ တတ်ပြီး ဆောင်း ပါးတွေကတော့ ပိုခက်တာပေါ့။ အီဒီယံက အီဒီယံအဘိဓာန်မှာ ရှာလို့ရပေမဲ့ တချို့ ဝေါဟာရတွေက အီဒီယံကမဟုတ်တော့ မသိရင်ဒုက္ခတော်တော် ဒုက္ခပေးပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သူတို့ထုတ်ပေးထားတဲ့ နောက်ထပ် အသုံးများ ဝေါဟာရဆယ်ခုကို ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါကို မဖတ်ခင် စာမျက်နှာပေါ်က မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်ကနေ ယူပြီး တင်ပေးလိုက်တဲ့ မြန်မာစာကြောင်း တစ်ကြောင်းကို အချိန်ရရင် အဓိပ္ပါယ် ပြန်ကြည့်ကြပါဦး။
Lk Wt မှ ယူထားပါသည်
" မြန်မာစာကို မြန်မာ ဖတ်ပြီး မြန်မာ မူးသွားတယ်။ ဘာလို့ အဲ့လိုမျိုးကြီး နားလည်ရခက်အောင်ရေးတာလဲ မသိဘူး။ @-@"
>>> သစ္စာရှိမှုဟူသော ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ပတ်သက်၍ အရှင်သခင် တစ်ဦး အပေါ်၌ အလုပ်အကျွေးပြုခြင်းဟု အနက် အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူပါက အဆိုးအကောင်းသိတတ်သည့် မိမိ၏ စိတ်နှင့် မဆန့်ကျင်သော အရာတစ်ခု ကို သစ္စာရှိစွာ လုပ်ပေးရမည်ဟူသော အယူအဆနှင့် ဆန့်ကျင်မှု အပေါ်၌ အလေးအနက် မထားကြပေ။ <<
အဓိပ္ပါယ် ပြန်လို့ ရကြပါပြီလား။ ရပြီဆိုရင်တော့ ထပ်မူးကြတာပေါ့။
လွယ်လွယ်ပြော ရသားနဲ့ ဝေါဟာရ ဆယ်လုံး
1 ) we must=it is imperative that we
2 ) requires=is highly dependent on
3 ) offers=is at the forefront of providing
4 ) organizes=brought about the organization of
5 ) speed=significantly expedite the process of
6 ) then=at which time
7 ) ultimately=in the final analysis
8 ) works=is committed to
9 ) works=is focus on
10 )when=at such time
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 2/08/2013 - No comments
ဂလိုဘယ်သတင်းဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ငွေကြေးပြဿနာရဲ့ အဓိကလက်သည်က အမေရိကနဲ့ ဝေါစထရိတ် စတာတွေ မဟုတ်နိုင်သလို ဥရောပနဲ့ သူတို့ စင်ထရယ်ဘဏ် စတာတွေ လည်း မဟုတ်နိုင်ပြန်ပါဘူး။
အဲဒီ ပြဿနာက ဇင်ဘာဘွေမှာ စတာပါ။ ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးက နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာဆိုလို့ အမေရိကန် ၂၁၇ ဒေါ်လာပဲ ဘဏ်ထဲမှာ ကျန်တော့တယ်လို့ မီဒီယာကို အသိပေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အဲဒီကနေ တဆင့် ငွေစက္ကူတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်သလဲလို့ သဲလွန်စ ရှာဖွေ ရာက တဆင့် တရားခံအကြောင်းတရား ( ဆော့ဇက်စ် ) ကို အိမ်သာက သတိပေးဆိုင်းဘုတ်မှာတွေ့ရတာပါ။ ကမ္ဘာ့ငွေကြေးတွေ ဘယ်ရောက် ကုန် တယ်ဆိုတာ တိတိကျကျ ပြောဖို့ခက်သေးပေမဲ့ ဇင်ဘာဘွေ ဒေါ်လာတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်တယ်ဆိုတာကိုတော့ အောက်ကဆိုင်းဘုတ်ထဲမှာ သဲလွန်စ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
အဘိဓမ္မာအသင်းကြီး (စင်္ကာပူ) ၏ တတိယအကြိမ် အသံမစဲ မဟာပဋ္ဌာန်း ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ပွဲ
in ဘာသာရေးသတင်း - on 2/08/2013 - No comments
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ အဘိဓမ္မာအသင်းကြီး (စင်္ကာပူ) ၏ Website နှင့် Facebook တို့တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Website : www.abhidhammafoundation.org
Facebook : www.facebook.com/abhidhammasociety
in Reader's Digest, ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 2/07/2013 - No comments
မီလျံနာသူဌေးကြီး လေယာဉ်စက်ပျက်ကျလို့ သေဆုံးသွားတော့ ကျန်ရစ်တဲ့ သားသုံးယောက်မှာ အမွေတွေ အများကြီး ခွဲဝေရရှိလိုက်ကြတယ်။ ကျေးဇူး ကြီးမားလှတဲ့ ဖခင်ကြီးရဲ့ ဆန္ဒအတွက် ငွေဘယ်လောက်ပဲ ကုန်ကုန် ကု သိုလ်ကောင်းမှုတွေ ပြုလုပ်ကြမယ်လို့လည်း သူတို့က သံဓိဋ္ဌာန်ချလိုက်ကြ တယ်။
ခက်တာက ဘာလုပ်ကြမလဲ ဆိုတဲ့ အဖြေကို မရနိုင်ကြတာ။ ဒါနဲ့ သူတို့ ဇနီးတွေနဲ့ တိုင်ပင်ကြတယ်။ သူတို့ဇနီးတွေ ထညီတညွတ်တည်း ပေးတဲ့ အကြံဉာဏ်က ငြင်းလို့မရအောင် ကောင်းလွန်းတော့ သူတို့ အကြံပေးတဲ့ အတိုင်းပဲလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။
"ရှင်တို့ဖခင်ကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးဆန္ဒက လေယာဉ်စက်ပျက်နေချိန်မှာ လေထီးလေးတစ်ချောင်းလောက်ရှိရင် ကောင်းမှာပဲ ဆိုတဲ့ ဆန္ဒပဲဖြစ်မယ်။ ရှင်တို့အဖေကို တကယ်ချစ်ရင် သူ့ ရုပ်အလောင်းကို မီးသဂြိင်္ုတဲ့ အခါ လေ ထီးတစ်ချောင်းစီ ထည့်ပေးလိုက်ကြပါ။ ဒါမှ ရှင်တို့ အဖေကိုကျေးဇူးဆပ် ရာရောက်မယ် " တဲ့။
Ref: R.D, Sep,2012
in ဇင်ဝေသော်, လှည့်ကြည့်မိတဲ့ ထောင့်ချိုးများ, ခေတ်သစ်ပုံပြင် - on 2/07/2013 - 1 comment
( ပုံပြင် တစ် )
ကျွန်တော်တို့ဝင်းထဲမှာ ညနေပိုင်း သန့်ရှင်းရေးလာလုပ်တဲ့ အိန္ဒိယန်း တစ်ယောက် ရှိတယ်။ သူ့နာမည်ကိုတော့ အဲလက်(စ်)လို့ အလွယ်တကူ မှတ်ထားလိုက်ရတယ်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်၊ ပန်းပင်တွေကို ရေလောင်း၊ အလုပ်ချိန် တစ်နာရီလောက်တော့ ကြာပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကို ပေးတဲ့လစာက တစ်လကို စင်္ကာပူဒေါ်လာ (၅၀၀) ပါ။
သူ့အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားလို့ နည်းနည်းပါးပါး မေးကြည့်တော့ သူ့မှာ တစ်ခြား အချိန်ပိုင်း အလုပ်နှစ်ခု ရှိတယ်။ ဒေါ်လာ (၈၀၀) နဲ့ (၅၀၀) စီ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူ့လစာဟာ (၁၈၀၀) ဖြစ်သွားတယ်။ သူပြောတဲ့စကားအရ သူ့မှာ အိမ်ထောင်ရှိတယ်။ သမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူ စင်္ကာပူကို လာပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဒေါ်လာ (၂၀၀၀၀) စုမိဖို့ပါတဲ့။
ဒေါ်လာနှစ်သောင်းရှိရင် ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ အိန္ဒိယကို ပြန်မယ်၊ ကိုယ်ပိုင် ဈေးဆိုင်ဖွင့်မယ်။ အဲ့ဒါဆို အိန္ဒိယမှာ ငါကိုယ်တိုင် ဘော့စ် တစ်ယောက် ဖြစ်သွားပြီလို့ သူ့စိတ်ကူးကို ပြောပြပါတယ်။ တရုတ်လိုရှာ၊ ကုလားလိုစုဆိုတဲ့ မြန်မာစကားက တော်တော်မှန်တယ်။ သူသိပ်ကြိုက်တဲ့ ကြက်သားဒန်ပေါက် ထမင်းကိုတောင် တစ်လကို တစ်ကြိမ်ပဲ စားတယ်။ စားတဲ့နေ့က သူလစာ ထုတ်တဲ့နေ့ပါ။ ကြက်သား ဒန်ပေါက်တစ်ပွဲကို ငါးဒေါ်လာပေးရပါတယ်။
ဒီမှာ သူအလုပ်လုပ်တာ သုံးနှစ်လောက်တော့ ရှိပြီ ထင်တာပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ လ ကတော့ သူရောက်လာပြီး သူ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ သူ့နာမည်က ရာဇူးတဲ့။ သူလုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေကို ရာဇူးက ဆက်ပြီး လုပ်တော့မယ်။ သူကတော့ အိန္ဒိယကို အပြီး ပြန်တော့မှာ ဆိုပြီး နှုတ်ဆက် သွားပါတယ်။ မင်း ဒေါ်လာနှစ်သောင်း ရပြီလားဆိုတော့ သူက လက်မထောင်ပြတယ်။ သူ့အတွက် ဝမ်းသာရပါတယ်။ သူ့နိုင်ငံ၊ သူ့ဇနီးနဲ့ သူ့သမီးလေးဆီ သူ ပြန်လို့ ရသွားပြီ။ သူ စိတ်ကူးသလို ဖြစ်ခဲ့ရင် သူကိုယ် တိုင် ဘော့စ်တစ်ယောက် ဖြစ်သွားပြီ။ ပြောဖို့ ကျန်နေတာက သူက ဗာရာဏ သီကပါ။ ဆင်းရဲတဲ့ဒေသတစ်ခုပေါ့။ ဒါ့ကြောင့် ဒေါ်လာနှစ်သောင်းနဲ့ ရင်းနှီး စားသောက်ဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားမိတာက သူ ဘယ်လိုစုစောင်းသွားသလဲဆိုတာ ပါဝင်သလို ဈေးကြီးလှပါတယ်ဆိုတဲ့ စင်္ကာပူရဲ့ အခြေခံစားဝတ်နေရေး စရိတ်တွေလည်း ပါပါတယ်။ တကယ်တမ်း တွက်ကြည့်ရင် နေစရာ အိမ်ခန်း ကလွဲရင် စင်္ကာပူရဲ့ အခြေခံ စရိတ်ဟာ မဖြုန်းတဲ့သူအဖို့ ဈေးမကြီးလှပါဘူး။ ဝင်ငွေနဲ့ တိုင်းတာကြည့်ရင် ဈေးချိုတယ်လို့တောင် ပြောလို့ ရပါတယ်။
တစ်လကို ဒေါ်လာ (၁၈၀၀) ရတဲ့ အဲလက်(စ်)ရဲ့ တစ်နေ့ဝင်ငွေဟာ ဒေါ်လာ (၆၀) ပါပဲ။ စားစရိတ်အတွက် ညမနက် ကြက်သားဒန်ပေါက် စားမယ်ဆို ရင်တောင် (၁၀) ဒေါ်လာပဲ ကုန်သေးတယ်။ ဝတ်ဖို့ဆိုတာကလည်း မော်ဒယ် ကျသွားတဲ့ ဂျော်ဒါနိုးတို့ ဘာတို့ကို ဝယ်ဝတ်ရင် (၅) ဒေါ်လာ၊ ဂျင်းဘောင်းဘီ ဆိုရင်လည်း ဒေါ်လာ (၂၀)၊ (၃၀)လောက်နဲ့ ရနိုင်တယ်။ နေရေး အတွက်တော့ စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။ ငှါးထားတဲ့အိမ်ခန်းမှာ မိတ်ဆွေတွေ နဲ့ ပေါင်းပြီးနေမယ်ဆိုရင်တောင် တစ်လကို (၃၀၀) နဲ့ (၅၀၀) ကြားထဲမှာ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဆိုပါတော့ တစ်ရက်ကို နေခအတွက် (၁၅) ဒေါ်လာ။ မဖြစ်မနေ ကုန်နိုင်သေးတာက ဖုန်းခ၊ တစ်လကို အိန္ဒိယန်းတစ်ယောက် က ဒေါ်လာ (၂၀) ထက်ပိုပြီး အကုန်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာတယ်။ ခရီးသွားလာစရိတ်က သူ့နေရာနဲ့ သိပ်မဝေးလှတော့ MRT စီးရင် အသွားအပြန် (၁) ဒေါ်လာစီ၊ (၂) ဒေါ်လာလောက်နဲ့ အဆင်ပြေနိုင်တယ်။
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုရင် တစ်နေ့တာ သူ့ ကုန် ကျငွေဟာ ဒေါ်လာအစိတ် ကျော်ကျော်လေးပဲ ရှိသေးတယ်။ ဒီတော့ တစ်နေ့ ကို ဒေါ်လာ (၃၀)နဲ့ (၄၀) ဝန်းကျင် စုလို့ ရနိုင်တယ်။ ဒါဆိုရင် တစ်လကို ဒေါ် လာ (၁၀၀၀) လောက် သူ စုလို့ ရနိုင်တယ်လို့ တွက်လို့ ရတယ်။ ဒါ့ကြောင်းလည်း သူမှန်းထားတဲ့ ဒေါ်လာ (၂၀၀၀၀) ပြည့်သွားတာပေါ့။
လက်ဖွာတဲ့ လူချမ်းသာတွေအတွက် ပစ္စည်းတွေက ဈေးကြီးပေမယ့် အခြေခံ လူတန်းစားတွေအတွက် ဈေးချိုချိုနဲ့ ရနိုင်တဲ့ အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေ လည်း ရှိတယ်။ ဆိုပါတော့၊ ဒေါ်လာသောင်းချီကုန်မယ့် ဘူဖေးဒင်းနား ကြီးတွေ ရှိသလို သုံးဒေါ်လာနဲ့ ကိစ္စပြီးလို့ ရတဲ့ ကြာဇံကြော်လည်း ရှိတယ် ။ ထောင်ချီပေးရတဲ့ အိုင်ဖုန်းရှိသလို ဖုန်းလိုင်းယူရင် အလကားရတဲ့ ဟန်း ဆက်တွေ လည်း ရှိတယ်။ မီလျံဝက်လောက် ပေးရတဲ့ ကားတွေ ရှိသလို တစ်ဒေါ်လာနဲ့ လိုရာကို ရောက်နိုင်တဲ့ MRT တွေ၊ ဘက်(စ်)ကားတွေလည်း ရှိတယ်။ အားလုံးဟာ အဲယားကွန်းတွေနဲ့ အေးစိမ့်နေတာပါပဲ။
( ပုံပြင် နှစ် )
ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာ လုပ်နေတဲ့ကောင်းမလေးနဲ့ စကားပြောကြည့်မိတယ်။ သူမ ရတဲ့လစာက ခြောက်သောင်းလို့ ဆိုပါတယ်။ ဘက်(စ်)ကားခက အသွား ငါးရာ၊ အပြန် ငါးရာတဲ့။ ဘက်(စ်)ကားခနဲ့တင်ပဲ သူမရဲ့လစာထဲက နှစ်သောင်းခွဲသုံးသောင်း ကုန်သွားပြီ။ ဒီကောင်မလေး ဘာနဲ့များ စားမှာပါလိမ့်။ ခရီးသွားရင်း ထမင်းအဝစား တစ်ပွဲကို တစ်ထောင့် ငါးရာက တစ်နေရာ၊ နှစ်ထောင်က တစ်နေရာ ရှင်းခဲ့ရတာကို သတိရမိတယ်။
နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီရဲ့ ခြားနားချက်က အဲ့ဒါပါပဲ။
တစ်နေ့ကို ဒေါ်လာငါးဆယ်ဝင်တဲ့ အလုပ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ စားစရိတ်က ရှစ်ဒေါ်လာနဲ့ ဆယ်ဒေါ်လာကြားမှာ ရှိတယ်။ တစ်နေ့ကို မြန်မာငွေ နှစ်ထောင်ရတဲ့ စက်ချုပ်သမတစ်ယောက်ရဲ့ စားစရိတ် က ဝယ်စားရင် နှစ်ထောင်။ (ချက်စားရင်တော့ သက်သာကောင်းပါရဲ့)
စင်္ကာပူက အလုပ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ ခရီးစရိတ်က (သိပ်မဝေးလှဘူးဆို ရင်) နှစ်ဒေါ်လာနဲ့ သုံးဒေါ်လာ။ မြန်မာပြည်က စက်ချုပ်သမလေးရဲ့ ခရီး စရိတ်က တစ်ထောင်။
ကျွန်တော် ဆက်ကြည့်မိတဲ့ ကိစ္စက ဒေါ်လာနှစ်သောင်းနဲ့ အိမ်ပြန်သွားတဲ့ အဲလက်(စ်)ရဲ့ အကြောင်းပါ။
မြန်မာပြည်ကနေ အလုပ်လာလုပ်ကြတဲ့ မြန်မာတွေ ရှိတယ်။ စာရင်းစစ်၊ အင်ဂျင်နီယာနဲ့ ကွန်ပျူတာပညာရှင်တွေ များပါတယ်။ လုပ်သက် သိပ် မရှိကြသေးဘူးဆိုရင် သူတို့ ဝင်ငွေက ဒေါ်လာ (၁၈၀၀) နဲ့ (၂၅၀၀) ကြားလောက်မှာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အရည်အချင်း သိပ်ရှိပြီး ထက်မြတ်တဲ့ လူငယ်အချို့နဲ့ စင်္ကာပူမှာ ကျောင်းပြီးသူ အချို့ကတော့ ဒီထက် ပိုရစရာ ရှိပါတယ်။
ထားပါတော့။ သူတို့ကိုလည်း စိတ်ကူးထဲမှာ အဲလက်(စ်)လို ပြည်တော်ပြ န်နိုင်ဖို့ ငွေစုခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ဥပမာ ဒေါ်လာ (၂၅၀၀) ရတဲ့ လူငယ် တစ်ယောက် ဆိုပါတော့။ ဒေါ်လာ (၈၀၀) လောက် သုံးခိုင်းပြီး ဒေါ်လာ (၁၇၀၀) လောက် အစုခိုင်းလိုက်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ကျန်ရစ်တဲ့ မိသားစု အတွက်၊ မြန်မာပြည်ကနေ ထွက်မလာခင် ချေးငှါးခဲ့ရတဲ့ ကျန်ကျမှုတွေ အ တွက် တစ်လကို ဒေါ်လာ (၅၀၀) ကနေ (၉၀၀) ပြန်ပို့ရမယ်။ ဒါဆိုရင် ဒေါ်လာ တစ်ထောင်ဝန်းကျင်လောက်တော့ စုထားလို့ ရနိုင်တယ်။
ကျန်းမားရေးပြဿနာ ကြီးကြီးမားမား မဖြစ်ဘူးဆိုရင် တစ်နှစ်ကို တစ်သောင်းကျော်ကျော်တော့ စုမိပါလိမ့်မယ်။ ဆိုပါတော့၊ သုံးနှစ်ကနေ ငါးနှစ်အထိ အလုပ်လုပ်ရင်း ပိုက်ဆံရှာမယ်။ ဒေါ်လာငါးသောင်းလောက် စုမိပြီ၊ ရန်ကုန်ပြန်မယ်။ သူတို့ ဘာလုပ်စားကြမှာပါလိမ့်။
အဲလက်(စ်)ကတော့ မိဘလက်ငုတ် မပါဘဲ သူကိုယ်တိုင် ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင် ဖွင့်ပြီး သူ့မိသားစုကို ဦးဆောင်တော့မတဲ့။ အဲလက်(စ်)ကို သတိရလို့ ရာဇူးကို မေးကြည့်တော့ သူတော်တော်လေး အဆင်ပြေနေတယ်လို့ ကြား ရတော့ ဝမ်းသာမိပါသေးတယ်။
တောင်ဒဂုံမှာ ရှိတဲ့ လယ်ကွက်သာသာ အိမ်မြေက သိန်းထောင်ချီနေသတဲ့။
ငါးနှစ်လောက် ပိုက်ဆံစုပြီး မြန်မာပြည်ကို အပြီးပြန်မယ်လို့ ကြုံးဝါးသွားတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ချို့ စင်္ကာပူကို ပြန်ရောက်လာတယ်။ ဟိုပြန်ရောက်တော့ ရိုးရိုး သားသားနဲ့ လုပ်စားဖို့ ခက်လို့တဲ့။ ငွေအရင်းအနှီး ရှိဖို့ထက် အကပ်ကောင်းဖို့ က ပိုအရေးကြီးနေလို့တဲ့။ အကပ် မရှိလို့ကတော့ သိန်းထောင်ချီ ပါသွား လည်း လုပ်စားဖို့ ခက်နေတုန်းပဲတဲ့။
သမ္မတကြီးကတော့ ပြန်လာဖို့ ဖိတ်ပါရဲ့။
မဆီမဆိုင်တဲ့ဟာတွေအတွက် စားပွဲအောက်ကနေ ငွေထိုးပေးနေရတာတွေ များတော့ ပြန်သွားသူ တစ်ချို့ ပြန်ရောက်လာတာကိုလည်း တွေ့ ရတယ် ။ တောင်ဒဂုံက လယ်ကွက်က သိန်းတစ်ထောင်ဆိုတော့ သူတို့ စုထား တဲ့ ဒေါ်လာနဲ့ မလောက်တာလည်း ပါမှာပေါ့။
အခြေခံပြဿနာတွေ မပြေလည်သေးရင် ပြည်ပမှာ အနေကြာတဲ့ မြန်မာေ တွ ပြန်လာဖို့ ဆိုတာကလည်း …..
ရွှေပြည်တော် - မျှော်တိုင်းဝေး …..။
( မနှစ်က မေလမှာရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးမို့ သတင်းအချက်အလက်နဲ့ ကုန်ဈေးနှုံးတချို့ ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ် )
Labels: ဇင်ဝေသော်, လှည့်ကြည့်မိတဲ့ ထောင့်ချိုးများ, ခေတ်သစ်ပုံပြင်
ပြန်ချင်တဲ့ ကွန်မင့်များ ( ၁၁ ) ဂျပန်ကမြန်မာကိုပေး...
သင်းကွဲလိပ်ပြာများရဲ့ ရင်ခုန်သံကို ခံစားခြင်း ( ၆ ...
လီကွမ်းယုပြောပြတဲ့ မြို့တော်အင်္ဂါရပ် ခြောက်ခု ( ၂ )...
လီကွမ်းယုပြောပြတဲ့ မြို့တော်အင်္ဂါရပ် ခြောက်ခု ( ၁ )...
အဘိဓမ္မာအသင်းကြီး (စင်္ကာပူ) ၏ တတိယအကြိမ် အသံမစဲ မဟာပ...
လွယ်လွယ်ပြော ရသားနဲ့ ( အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရများ )
ကွန်ပလိန်းလောက ( တနင်္ဂနွေ အပျင်းပြေ )
စစ်ပွဲရဲ့ ချိုသာတဲ့ အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရများ
သူတို့ ကြေးမုံပေါ်ကျနော်တို့ ကြေကွဲမှန်စများ